အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ကို အဲမရိတ် သို့မဟုတ် ယူအေအီးဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းလေ့ ရှိကြပြီး အာရှတိုက် အနောက်တောင်ဘက် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ အာရပ်ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေသော နိုင်ငံများမှာ အရှေ့ဘက်တွင် အိုမန်နိုင်ငံ နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကာတာနိုင်ငံ ၊ အီရန်နိုင်ငံတို့နှင့်လည်း ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉.၂ သန်းမျှ ရှိပြီး ၁.၄ သန်းမှာ အဲမရိတ် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကာ ၇.၈ သန်းမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ဖက်ဒရယ် သမ္မတ စနစ် နှင့် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်
၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၇၁
၈၃,၆၀၀ km² (၃၂,၂၇၈ sq mi) (အဆင့်: ၁၁၆)
၄,၇၉၈,၄၉၁ (၂၀၀၇) (အဆင့် - ၁၂၀)
၅၅/km² (၁၄၂.၅/sq mi) (အဆင့် - ၁၅၀)
US $ ၄၉,၉၉၅
အလွန်မြင့် · ၃၂
UAE ဒါဟမ် (AED)
၁၉၇၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတွင် မြို့တော်ဖြစ်သော အဘူဒါဘီ နှင့်အတူ ဒူဘိုင်း၊ ရှာဂျာ၊ အက်ဂျ်မန်၊ အွမ်-အယ်-ကူဝိန်း၊ ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမား၊ ဖူဂျာအီရာ ဟူသော ပြည်နယ် (၇) ခု ပါဝင်သည်။ ပြည်နယ် တစ်ခုချင်းစီကို အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှိသော စော်ဘွားတစ်ဦးစီမှ အုပ်ချုပ်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံး စုပေါင်း၍ ဖက်ဒရယ် ထိပ်သီးကောင်စီ တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှာ စော်ဘွားတစ်ဦးအား အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသည်။ အစ္စလာမ် ဘာသာသည် နိုင်ငံတော် ဘာသာဖြစ်ပြီး အာရပ်ဘာသာ စကားမှာ တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကား ဖြစ်သော်လည်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာကို နေရာအနှံ့ အသုံးပြုကြသည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ ရေနံထွက်ရှိမှုမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတ္တမမြောက် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ထွက်ရှိမှုမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် ၁၇ ရှိသည်။ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သော အဘူဒါဘီ စော်ဘွား နှင့် ယူအေအီး၏ ပထမဆုံး သမ္မတဖြစ်ခဲ့သည့် ရှိတ်ဇာယာဒ်မှ အဲမရိတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြီးကြပ်ခဲ့ပြီး ရေနံမှာ ရသော အမြတ်ငွေများကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ပညာရေး နှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံတို့တွင် အသုံးချခဲ့သည်။ ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် ယူအေအီး၏ စီးပွားရေးမှာ လုပ်ငန်း အစုံဆုံး ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ အများဆုံး ဖြစ်သော ဒူဘိုင်းမြို့မှာ ကမ္ဘာ့မြို့တော် တစ်ခုနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းဆက်သွယ်ရေး၏ ဗဟိုဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နှင့် ရေနံ တင်ပို့ရောင်းချမှုပေါ်တွင် များစွာ မှီခိုနေရဆဲ ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးမှာ ၎င်း၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ အတွက် ဝေဖန်ခံနေရဆဲ ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအတွင်း ရှာရီယာ ဥပဒေ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများကြောင့်လည်း ပါဝင်သည်။ ယူအေအီး၏ နိုင်ငံတကာတွင် နေရာတစ်ခု ရယူလာမှုကြောင့် ဝေဖန်သုံးသပ်သူ အချို့က ဒေသအတွင်း ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ရှိသောနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့ အင်အား အသင့်အတင့်ရှိ နိုင်ငံ တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
၁.၃ အော့တမန်နှင့် ပေါ်တူဂီခေတ်
၁.၄ ဗြိတိသျှခေတ် နှင့် ရေနံတွေ့ရှိခြင်း
၁.၆ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်
၂.၁ ဒေသရင်း အပင်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ
၃.၃ အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသများ
၇.၁ အိတ်စပို ၂၀၂၀
ယူအေအီးတွင် လူသားတို့ စတင်နေထိုင်သည်ဟု သိရှိရသော အချိန်မှာ ဘီစီ ၅၅၀၀ ခန့်တွင် ဖြစ်သော်လည်း ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၃၀,၀၀၀ ခန့်က မီးခေတ်ကျောက်များကို တွေ့ရှိရ၍ ထိုစဉ်ကတည်းက လူနေထိုင်မှု ရှိသည်ဟု ယူဆရသည်။ ထိုစဉ်အချိန်ကတည်းက ပြင်ပ ကမ္ဘာနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော သက်သေရှိခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား၏ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ယဉ်ကျေးမှု လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆက်သွယ်မှုများကို တောက်လျှောက် တွေ့ရပြီး အမျိုးအစားစုံလင်သည်။ ဟာဂျာတောင်များမှ ကြေးနီကို ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန့်ကပင် စတင် ကုန်သွယ်မှု ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၆၃၇ ခုနှစ်တွင် ဂျူလ်ဖာ (ယနေ့ခေတ် ရာဆယ်ခိုင်မာရ်)အား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အီရန်ရှိ ဆပ်စေးနီးယန်း အင်ပိုင်ယာအား ကျူးကျော်ရာတွင် တပ်စခန်း အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အေဒီ ၂ ရာစုတွင် အာရေဗျ၏ တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတွင်လူမျိုးစုတို့ ရွေ့လျားမှုများ ရှိခဲ့ပြီး အက်ဇ်ဒိုက် ကာတာနီ ( သို့မဟုတ် ယာမာနီ) နှင့် ကူဒါလူမျိုးစုများမှ ဟာဂျာတောင်ကုန်းများ၏ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် နေရာယူခဲ့ကြပြီး ဆပ်စေးနစ် တို့က အရှေ့ဘက် သို့မဟုတ် ဘာတီနာ ကမ်းရိုးတန်းကို လွှမ်းမိုး ထားခဲ့ကြသည်။ အယ်လ် ဘာရန်ဟု ခေါ်ဆိုသော ပါရှားကမ်းရိုးတန်းနှင့် တူရန်ဟု ခေါ်ဆိုသော အတွင်းပိုင်း အိုအေစစ် မြို့ အယ်လ်အန်တို့သည့် အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းမှ အတွင်းပိုင်းသို့ ကုန်သွယ်မှု ပြုရာလမ်းကြောင်းတွင် အရေးပါသော ခရီးထောက်နားရာ နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယူအေအီးတွင် ရှိသော ခရစ်ယာန်တို့၏ အစောဆုံး နေရာကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ပထမဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဆာရ်ဘာနီ ယပ်စ် ကျွန်းဟု ခေါ်သော ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် ဘာသာရေး အဆောက်အဦးများဖြစ်ကာ ၇ ရာစုက တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နက်စတိုးရီးယန်း ဘုရားကျောင်း ဖြစ်၍ အေဒီ ၆၀၀ ခန့်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အေဒီ ၇၅၀တွင် ထိုဘုရားကျောင်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ စွန့်ခွာခဲ့သည့် ပုံ ပေါ်သည်။ ထိုတွေ့ရှိမှုကြောင့် အာရပ်ကျွန်းဆွယ်တွင် အေဒီ ၅၀ ခုနှစ်မှ ၃၅၀ အတွင်း ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ၏ နောက်မှ လိုက်၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည့်ဟု ယူဆရသော ရှားပါးသော အထောက်အထား တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေချာသည့် အချက်မှာ အိုမန်တွင် ဂျွန်ဟု ခေါ်သော ဘစ်ရှော့တစ်ဦး ၅ရာစုတွင် ရှိခဲ့ပြီး အိုမန်၏ နောက်ဆုံး ဘစ်ရှော့မှာ ၆၇၆ ခုနှစ်တွင် ရှိခဲ့သော အစ်တီးယန်း ဖြစ်သည်။
အာရပ်ကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့မြောက်ထိပ်စွန်းသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ပျံ့နှံ့ရခြင်းမှာ အေဒီ ၆၃၀ တွင် အစ္စလာမ်တို့၏ တမန်တော် မိုဟာမက်ထံမှ အိုမန်ရှိ အုပ်ချုပ်သူများသို့ ဟစ်ဂျရာဟု ခေါ်သော အစ္စလာမ်တို့၏ ရွေ့လျားမှုအပြီး ၉ နှစ်အကြာ တွင် တိုက်ရိုက်ပေးပို့သော စာ၏ နောက်ဆက်တွဲများ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ ထို့နောက်တွင် အုပ်ချုပ်သူများ အုပ်စုဖွဲ့၍ မဒီနာမြို့သို့ သွားရောက်ကြကာ အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီးနောက်တွင် မြောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းကို လွှမ်းမိုးထားသော လူကြိုက်နည်းသသည့် ဆပ်စေးနစ်တို့ကို အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သည်။ တမန်တော် မိုဟာမက် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ တောင်ဘက်ရှိ အစ္စလာမ် အဖွဲ့အစည်းအသစ်များမှ မွတ်စလင် ခေါင်းဆောင်များကို ပုန်ကန်၍ ခွဲထွက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ အဘူဘက်ကာမှ မဒီနာမြို့မှ စစ်တပ်တစ်တပ်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှ ရစ်ဒါစစ်ပွဲဖြင့် နယ်မြေများကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ကာ သွေးလွှမ်းသော ဒစ်ဘာ တိုက်ပွဲတွင် လူဦးရေ ၁၀,၀၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်မှ ကယ်လီဖိတ်၏တည်တံ ခိုင်မြဲမှုကို ပြသခဲ့ပြီး အာရပ်ကျွန်းဆွယ်ကို အသစ်ပေါ်ထွန်းလာသော ရာရှီဒွန် ကယ်လီဖိတ်၏ အောက်တွင် စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။
ကြမ်းတမ်းသော သဲကန္တာရ ပတ်ဝန်းကျင်မှ နေ၍ စွယ်စုံရသော လူမျိုးစုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ လှည့်လည်သွားလာနေသော အုပ်စုများ ဖြစ်ကြပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်ရေး အတွက် တိရစ္ဆာန် မွေးမြူခြင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အမဲလိုက်ခြင်း စသည့် အမျိုးမျိုးသော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထိုအုပ်စုတို့ ရာသီအလိုက် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုမှ စ၍ အုပ်စုအချင်းချင်း မကြာခဏ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွာလေ့ ရှိရာမှ ရာသီ အလိုက် သို့မဟုတ် ရာသီတစ်ခု ၏ တစိတ်တဒေသ နေထိုင်ရာ နေရာများ ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ လူမျိုးစု အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းကြပြီး အဘူဒါဘီရှိ ဘာနီရပ်စ် နှင့် အယ်ဘူဖာလာ၊ ကမ်းရိုးတန်းရှိ အယ်လ် အိန်၊ လီဝါ နှင့် အယ်လ်ဘာရိန်း၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းရှိ ဒဝါဟီယာ၊ အဝါမီယာ နှင့် မနာဆီယာ၊ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ရှာကိုင်ရင် နှင့် မြောက်ဘက်ရှိ ကာဝါဆင် တို့ အပါအဝင် အချို့သော အစုအဖွဲ့ အမည်များမှာ ယနေ့ခေတ် အယ်မရိတ်နိုင်ငံသားများ ဆက်လက်အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်သည်။
၁၆ရာစုသို့ ရောက်သော အခါတွင် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဒေသတွင်းရှိ လူဦးရေ၏ အချို့အဝက်မှာ အော့တမန်အင်ပိုင်ယာ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် တိုက်ရိုက် ကျရောက်လျှက် ရှိသည်။  ၁၇ ရာစုတွင် ယနေ့ခေတ် အဘူဒါဘီ ဟုခေါ်သော နေရာတွင် တည်ရှိခဲ့သော အားကောင်းသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘာနီရပ်စ် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် နေထိုင်သူများ အပေါ် ပေါ်တူဂီတို့မှ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ရှိခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းရှိ မူစကက်၊ ဆိုဟာ နှင့် ခိုရ်ဖာကန် တို့တွင် ဖြစ်သည်။ ၁၆ ရာစုတွင် ကမ်းရိုးတန်းနေ လူမျိုးစုများအပေါ် အယ်ဘူကာကီ နှင့် ၎င်းနောက်မှ လိုက်သော ပေါ်တူဂီတပ်မှူးများမှ သွေးလွှမ်းသော တိုက်ပွဲများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ခံတပ်များတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းကို ဗြိတိသျှတို့က ပင်လယ်ဓားပြ ကမ်းရိုးတန် အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုဒေသတွင် အခြေစိုက်သော အယ်လ်ကာဝါဆင်တို့၏ လှေများက ဗြိတိသျှ အလံတင်ထားသော သင်္ဘောများကို ၁၇ ရာစုမှ ၁၉ ရာစု အထိ အနှောက်အယှက် ပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။  အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေးကို ဓားပြတိုက် နှောက်ယှက်သူများ၏ ဘေးရန် မှ ကာကွယ် ရန် အတွက် ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမား မှ စခဲ့သော စစ်ဆင်ရေးမှ အစပြု၍ ၁၈၀၉ ခုနှစ်တွင် ဌာနချုပ်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်ရှိ သင်္ဘောဆိပ်များကို ၁၈၀၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ၁၈၁၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ဆိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ နောက်တစ်နှစ်တွင် ဗြိတိသျှ တို့နှင့် ဒေသခံ အုပ်ချုပ်သူ အချို့တို့ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ တလျှောက်ရှိ ပင်လယ်ဓာပြများကို တိုက်ခိုက်ရန် အတွက် သဘောတူစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ရာမှ တဆင့် ကမ်းရိုးတန်းရှိ စော်ဘွားတိုင်းပြည်များ၏ အနေအထားကို ဖော်ပြသော ထရူရှယ်တိုင်းပြည်များ ဆိုသော အသုံးအနှုန်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၁၈၄၃ နှင့် ၁၈၅၃ တို့တွင် နောက်ထပ်စာချုပ်များ ထပ်မံ ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ပြင်သစ် နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ အစရှိသော အခြားသော ဥရောပနိုင်ငံများ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို တုံ့ပြန်ရန် အတွက် ဗြိတိသျှတို့နှင့် ထရူရှယ် စော်ဘွားနိုင်ငံများသည် ၁၈၉၂ ခုနှစ် စာချုပ်တွင် ဆက်ဆံရေး ပိုမို နီးကပ်စွာ တည်ဆေက်ခဲ့ကြပြီး ဗြိတိသျှတို့ အနေနှင့် အခြားသော ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများနှင့်လည်း အလားတူ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ စော်ဘွားများမှ ၎င်းတို့၏ နယ်မြေများကို ဗြိတိသျှတို့မှ အပ အခြားသူများအား မပေးအပ်ရန်နှင့် ဗြိတိသျှတို့၏ သဘောတူညီချက် မပါဝင်ဘဲ အခြားသော နိုင်ငံခြား အစိုးရများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း မပြုရန် သဘောတူခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ တို့မှလည်း ထရူရှယ်နိုင်ငံများ၏ ကမ်းရိုးတန်းအား ပင်လယ်မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ကုန်းမြေပေါ်မှ တိုက်ခိုက်လာပါကလည်း အကူအညီပေးရန် ကတိပြုခဲ့သည်။ ထိုသီးသန့် သဘောတူညီချက်ကို အဘူဒါဘီ၊ ဒူဘိုင်း၊ ရှာဂျာ၊ အက်ဂျ်မန်၊ ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမား နှင့် အွမ်-အယ်-ကူဝိန်း တို့အား အုပ်ချုပ်သူများမှ ၁၈၉၂ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်မှ ၈ ရက်ကြားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုသဘောတူညီချက်အား အိန္ဒိယ ဘုရင်ခံ နှင့် လန်ဒန်ရှိ ဗြိတိသျှ အစိုးရတို့မှ ဆက်လက်၍ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှတို့၏ ပင်လယ်ပြင် စောင့်ကြပ်ပေးမှုကြောင့် ပုလဲရှာ သင်္ဘောများ အနေနှင့် အတန်အသင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှတို့မှ ကျွန်ကုန်သွယ်မှုကို တားမြစ်ထားသဖြင့် အချို့သော စော်ဘွားများ နှင့် ကုန်သည်များအတွက် အရေးကြီးသော ငွေရပေါက် ရလမ်း တစ်ခု ပိတ်သွားခဲ့သည်။ ပင်လယ်ဓားပြမှုများနှင့် ပတ်သက်သော စွပ်စွဲချက်ကို ခေတ်သစ် အီမရိတ် သမိုင်းပညာရှင်တို့က ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ ရှာဂျာ၏ စော်ဘွားမှလည်း ၎င်း၏ ၁၉၈၆ ခုနှစ်ထုတ် စာအုပ် "ဆန်းကြယ်သော အာရပ် ပင်လယ်ဓားပြမှုများ"တွင် ငြင်းဆိုထားခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှခေတ် နှင့် ရေနံတွေ့ရှိခြင်းပြင်ဆင်
၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတွင် ပုလဲရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီး ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့တွင် နေထိုင်သူများ အတွက် ဝင်ငွေ နှင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိစေခဲ့သည်။ ပထမ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေခဲ့သော်လည်း အဓိကအားဖြင့် ထိုလုပ်ငန်း ကွယ်ပျောက်သွားရသည့် အကြောင်းမှာ ၁၉၂၀ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်း နှင့် ၁၉၃၀ ခုနှစ်များ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ငွေကျုံ့ခြင်း နှင့် ပုလဲမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ပေါ်ပေါက် လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော လုပ်ငန်းများမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီး မကြာမီတွင် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခါစ အိန္ဒိယ အစိုးရသစ်မှ ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ရှိ အာရပ်နိုင်ငံများမှ တင်ပို့သော ပုလဲများကို အခွန်အတုပ် ကြီးမားစွာ ကောက်ခံခြင်းကြောင့် ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့သည်။ ပုလဲလုပ်ငန်း ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ထရူရှယ်နိုင်ငံများတွင် ကြီးစွာသော စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနှင့် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဒူဘိုင်းမြို့
ဗြိတိသျှတို့က စော်ဘွားနယ်များအတွင်းရှိ အသေးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကူညီရန် အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရုံးတစ်ရုံးအား ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စော်ဘွားနယ်များ အတွင်းမှ စော်ဘွား ၇ ယောက်တို့က ၎င်းတို့အကြားရှိ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ကောင်စီတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးအား လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ထရူရှယ်နိုင်ငံများကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး  ဒူဘိုင်းစော်ဘွား ရာရှစ်၏ ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံ အဒီဘီတာအား ကောင်စီ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဥပဒေ အကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ပြီးနောက်တွင် ကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ လူမျိုးစု အသွင်သဏ္ဌန် နေထိုင်ကြသော လူ့အဖွဲ့အစည်း ပုံစံနှင့် စော်ဘွားနယ်များ အကြားတွင် နယ်နိမိတ် မရှိခြင်းကြောင့် အငြင်းပွားမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပြီး ညှိနှိုင်းမှု ဖြင့် ဖြစ်စေ ရှားရှားပါးပါး အင်အားသုံး၍ ဖြစ်စေ ဖြေရှင်းလေ့ ရှိသည်။ ဗြိတိသျှတို့က ထရူရယ် အိုမန် စကောက်ဟု ခေါ်သော စစ်တပ် အသေးစားကလေး တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်း ခဲ့ကြသည်။
၁၉၅၅ ခုနနှစ် အိုမန်နှင့် အဘူဒါဘီ တို့အကြား တောင်ပိုင်းရှိ နယ်နိမိတ် တစ်ခုဖြစ်သည့် ဘူရိုင်မီ အိုအေစစ် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားကြရာတွင် ဗြိတိသျှတို့က အဘူဒါဘီ ဘက်မှ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် သဘောတူညီချက်ဖြင့် အဘူဒါဘီ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတို့ကြား နယ်စပ်အငြင်းပွားမှု ပြဿနာအား ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း ထိုသဘောတူညီချက်မှာ အတည်မပြုရ သေးပေ။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု နှင့် အိုမန်နိုင်ငံတို့ အကြားရှိ နယ်စပ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ 
၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ အစိုးရမှ ထရူရှယ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ထံမှ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများအား လုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးရန် တရားဝင် ကတိကို ရရှိခဲ့သည်။ ပါရှားတွင် ၁၉၀၈ မှ စ၍ လည်းကောင်း၊ မက်ဆိုပိုတေးမီးယားတွင် ၁၉၂၇ ခုနှစ်မှ စ၍ လည်းကောင်း ရေနံ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့မှုကြောင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ ထုတ်လုပ်ရန် အလားအလာ ရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ရသဖြင့် ဗြိတိသျှ တို့ ဦးဆောင်သော ရေနံကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်သည့် အီရတ် ရေနံ ကုမ္ပဏီ (အိုင်ပီစီ) မှ ဒေသအား စိတ်ဝင်စားမှု ပြသခဲ့သည်။ နောင်တွင် ဘီပီ ရေနံကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာမည့် အင်ဂလို ပါရှား ရေနံကုမ္ပဏီ (အေပီအိုစီ) မှ အိုင်ပီစီတွင် ရှယ်ယာ ၂၃.၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ မှ စ၍ ကုန်းတွင်း ရေနံ ရှာဖွေရန် အတွက် ဒေသတွင်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီး အိုင်ပီစီ၏ အပေါင်းအပါ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်သော ရေနံ ကွန်ဆက်ရှင်း လိမိတက်၏ ကိုယ်စား အေပီအိုစီမှ ပထမဆုံး အကြိမ် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။ အေပီအိုစီ အနေနှင့် အိုင်ပီစီမှ တဆင့် လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သော အနီရောင်မျဉ်းကြောင်း သဘောတူညီချက်ကြောင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို တစ်ဦးတည်း လုပ်ကိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ပီစီအယ်လ် နှင့် ထရူရှယ် ခေါင်းဆောင်များ အကြားတွင် စာချုပ်အချို့ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ပုလဲကုန်သွယ်မှု ပြိုလဲသွားပြီးနောက် ဆင်းရဲမှုနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော ဒေသများ အတွက် အသုံးဝင်သော အကျိုးအမြတ်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ခေါင်းဆောင်များ အနေနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသော အီရန်၊ ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်၊ ကာတာ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကဲ့သို့ ရေနံကြောင့် တိုးပွားလာသော ချမ်းသာမှုများကို လက်တွေ့ မြင်တွေ့နိုင်ရန်မူ ခဲယဉ်းနေသေးသည်။ အဘူဒါဘီရှိ ပထမဆုံး လွန်တွင်းကို အိုင်ပီစီမှ လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် ထရူရှယ် ကမ်းရိုးတန်း ရေနံ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီ (ပီဒီတီစီ) မှ ၁၉၅၀ တွင် ရပ်စ်ဆာဒါ၌ စတင် တူးဖော်ခဲ့သည်။ ပေပေါင်း ၁၃,၀၀၀ နက်သော လွန်တွင်းနက် ဖြစ်ပြီး ၁ နှစ်မျှ ကြာအောင် တူးဖော်ခဲ့သော်လည်း ရေနံ မတွေ့ရှိခဲ့ပဲ ထိုခေတ်အခါက များပြားလှသော ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည့် စတာလင်ပေါင်တစ်သန်း မျှ ကုန်ကျခဲ့သည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ဘီပီ၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော ဒီအာစီ ရေနံရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီသည် အဘူဒါဘီနယ် အုပ်ချုပ်သူများထံမှ ကမ်းလွန် ရေနံရှာဖွေခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ဘီပီသည် နောင်တွင် တိုတယ်လ် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာမည့် ပြင်သစ် ရေနံကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေး ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော အဘူဒါဘီ ပင်လယ်ဒေသ လိမိတက် (အက်ဒ်မာ) နှင့် ဒူဘိုင်း ပင်လယ် ဒေသ လိမိတက် (ဒူမာ) တို့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေအောက် ရေနံ ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းအများအပြားကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နာမည်ကျော် ပင်လယ်ပြင် စူးစမ်းရှာဖွေ လေ့လာသူ ယက် ကော်စတူး ဦးဆောင်သည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ရေပေါ် ပလက်ဖောင်း ရေနံတူးစင်တစ်ခုကို ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟမ်းဘတ်မြို့မှ ဆွဲယူလာခဲ့ပြီး အဘူဒါဘီ ရေပိုင်နက် အမ်းရှိတ် ပုလဲကွင်း အပေါ်တွင် နေရာချထားကာ ရေနံတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မတ်လတွင် သာမာမာ အပေါ်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံး ရေနံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုကျောက်ဖြစ်တည်မှု မှတဆင့် တန်ဖိုးရှိသော ရေနံရှာဖွေ တွေ့ရှိမှု အမြောက်အများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိစေခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ရှိမှုမှာ ထရူရှယ် ကမ်းရိုးတန်းတွင် ပထမဆုံး စီးပွားဖြစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ရေနံ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ အက်ဒ်မာသည် ဇာကွန် နှင့် အခြားဒေသများတွင် ကမ်းလွန်ရေနံများ ဆက်လက် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အခြားကုမ္ပဏီများမှလည်း စီးပွားဖြစ် ရေနံတွင်းများ ဖြစ်သော ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်ရှိ ဖာတေး ရေနံတွင်း နှင့် ရှာဂျာကမ်းလွန် မူဘာရက် ရေနံတွင်း (အီရန်နှင့် ဝေစုခွဲ) တို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 
ပီဒီတီစီမှလည်း ကုန်းတွင်း ရေနံရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်တူးဖော်သော လွန်တွင်းနက် ၅ ခုမှလည်း ရေနံ မတွေ့ရှိခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း ၁၉၆၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇တွင် တာရစ်ဖ် အနီး ကမ်းရိုးတန်းဒေသ မာဘန် အမှတ် ၃ တွင်းမှ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ရေနံပမာဏကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပီဒီတီစီသည် အဘူဒါဘီ ရေနံ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရေနံမှ ရရှိသော ဝင်ငွေ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အဘူဒါဘီအား အုပ်ချုပ်သူ ဇာယတ် ဘင် စူလတန် အယ်လ် နာဟာယန်းမှ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအများပြားကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းများ၊ လူနေအိမ်များ၊ ဆေးရုံများ နှင့် လမ်းများကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဒူဘိုင်း ရေနံတင်ပို့မှု စတင်ခဲ့ပြီးနောက် ဒူဘိုင်းနယ် အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွား ရာရှစ် ဘင် ဆာအိ အယ် မတ်တွန်းမှ အကန့်အသတ်ရှိသော ရေနံအရင်းအမြစ်မှ ရရှိသော ဝင်ငွေများဖြင့် ခေတ်သစ် ကမ္ဘာ့မြို့တော် ဖြစ်လာမည့် ဒူဘိုင်း အတွက် လိုအပ်သော အမျိုးမျိုးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဇာယတ်ဘင် စူလ်တန် အယ်လ် နာဟာယန်းသည် ယူအေအီး၏ ပထမဆုံး သမ္မတ ဖြစ်သည်။
၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ အစိုးရ အနေနှင့် ယနေ့ခေတ် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာမည့် ဒေသများကို ဆက်လက် အုပ်ချုပ်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန် မတတ်နိုင်တော့ကြောင်း ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ပါလီမန် အမတ်များမှ တော်ဝင်ရေတပ်မတော် အနေနှင့် ထရူရှယ် စော်ဘွားနယ်များကို ကာကွယ်ရန် ပြင်ဆင်ထားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဒဲနစ် ဟေလီမှ ဗြိတိသျှ စစ်တပ်များသည် အလွန်အမင်း ဖြန့်ကျက်ထားသဖြင့် ထရူရှယ် စော်ဘွားနယ်များကို ကာကွယ်ရန် အတွက်လည်း လက်နက် ပြည့်စုံစွာ မရှိကြောင်း အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ဟာရိုးလ် ဝီလ်ဆင် က ထရူရှယ် စော်ဘွားနယ် ၈ ခု နှင့် အတူ ဗြိတိသျှတို့၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အောက်တွင် ရှိနေသော ဘာရိန်းနိုင်ငံ နှင့် ကာတာနိုင်ငံ တို့ကိုပါ သဘောတူစာချုပ် အရ ဆက်ဆံရေးကို အဆုံးသတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ၁၉၇၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဝန်ကြီးချုပ် အက်ဒ်ဝပ် ဟိသ်မှ ထပ်မံ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ် အကြာတွင် အဘူဒါဘီနယ်ကို အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွား ဇာယတ်ဘင် စူလ်တန် အယ်လ် နာဟာယန်းက ၎င်းတို့၏ အားနည်းချက်ကို သိရှိ ကြောက်ရွံ့သဖြင့် ဗြိတိသျှ တပ်များကို အဲမရိတ် တွင် ထားရှိသည့် အတွက် ကုန်ကျသည့် စရိတ်အားလုံးကို ကျခံပေးပါမည်ဟု ကမ်းလှမ်း၍ ဗြိတိသျှတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု စာချုပ်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရန် စည်းရုံးခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ လေဘာ အစိုးရမှ ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။. ဗြိတိသျှ လေဘာပါတီ အမတ် ဂေါ်ရွန်ဝီ ရောဘတ်မှ စော်ဘွားဇာယတ်အား ဗြိတိသျှတို့၏ တပ်များ ရုပ်သိမ်းမည်ကို အကြောင်းကြားပြီးနောက် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ စော်ဘွားနိုင်ငံ ၉ ခုမှ အာရပ်စော်ဘွားများ၏ ပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ဗြိတိသျှတို့နှင့် စာချုပ်အရ ဆက်ဆံရေး ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သော်လည်း နှစ်လည်ပိုင်း အထိ ပြည်ထောင်စုနှင့် ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူညီမှု မရနိုင်ခဲ့ပေ။
မိမိကိုယ်ကို ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိခြင်းအတွက် ကြောက်ရွံ့နေမှုများမှာ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ် မရပ်တည်မီ ရက်များတွင် ပိုမိုသိသာထင်ရှား လာစေခဲ့သည်။ အီရန် ဖျက်သင်္ဘော အုပ်စုမှ ပင်လယ်ကွေ့ အောက်ပိုင်းတွင် စုစည်းပြီး တွန်းဘ် ကျွန်းများဆီသို့ ဦးတည်မောင်နှင် လာခဲ့သည်။ ထိုကျွန်းများကို အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် အရပ်သားများနှင့် အာရပ်စစ်သားများအား ထွက်ပြေးခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ထိုကျူးကျော်မှုများ ဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင် ဗြိတိသျှ စစ်သင်္ဘောများမှာ မည်သို့မျှ အရေးယူခြင်း မရှိပဲ ရပ်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ဖျက်သင်္ဘောအုပ်စုသည် အဘူမူဆာ ကျွန်းသို့လည်း ချဉ်းကပ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် စော်ဘွား ခါလစ် ဘင် မိုဟာမက် အယ်လ် ကာဆီမီက ၎င်း၏ တပ်များ အနေနှင့် ကျူးကျော်လာသော အီရန်တပ်များကို တွန်းလှန်ရန် မဖြစ်နိုင်မှန်း သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုကျွန်းအား အီရန်သို့ တစ်နှစ်လျှင် ၃ သန်းဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျမှ အဘူဒါဘီရှိ ကမ်းမြောင်များကို ၎င်းတို့ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဘာရိန်း နိုင်ငံသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ၎င်း၊ ကာတာနိုင်ငံမှာ စက်တင်ဘာလတွင်၎င်း လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်တွင် ဗြိတိသျှ နှင့် ထရူရှယ် စော်ဘွားနယ်များ အကြား သဘောတူ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါတွင် ထိုနိုင်ငံများမှာ အပြည့်အဝ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။  အဘူဒါဘီ နှင့် ဒူဘိုင်းတို့ကို အုပ်ချုပ်သော စော်ဘွားနှစ်ဦးမှာ ၎င်းတို့ စော်ဘွားနယ် နှစ်ခုပေါင်းစပ်၍ ပြည်ထောင်စု တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲပြီး အခြေခံ ဥပဒေ တစ်ခုကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီးနောက် အခြားစော်ဘွားနယ် ၅ ခုမှ အုပ်ချုပ်သူများကိုလည်း အစည်းအဝေး ဖိတ်ခေါ်၍ ပြည်ထောင်စုသို့ ပေါင်းစည်းဝင်ရောက်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထိုစော်ဘွားနယ် နှစ်ခု အနေနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်တွင် အပြီးရေးဆွဲရန် သဘောတူထားခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် ဒူဘိုင်း ဧည့်ဆောင် နန်းတော်၌ အခြား စော်ဘွားနယ် လေးခုမှလည်း အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဟု ခေါ်တွင်သော ပြည်ထောင်စုသို့ ပေါင်းစည်း ဝင်ရောက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ဘာရိန်းနိုင်ငံနှင့် ကာတာနိုင်ငံတို့မှ ပြည်ထောင်စုသို့ ပူးပေါင်းဝင်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမား မှ ပြည်ထောင်စုသို့ ပေါင်းစည်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဖက်ဒရယ် အမျိုးသားကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထိုကောင်စီမှာ အုပ်ချုပ်သူ ၇ ဦးမှ ခန့်အပ်ထားသော အဖွဲ့ဝင် ၄၀ ဦး ပါဝင်သည့် အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးမှ အာရပ်နိုင်ငံများ အသင်းသို့ ၁၉၇၁ တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည် ၁၉၈၁ ခုနှစ် မေလတွင် ဖွဲ့စည်းသည့် ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီကို စတင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အဘူဒါဘီမှ ပထမဆုံး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အီရတ်နိုင်ငံမှ ကူဝိတ်နိုင်ငံအား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သည့် အခါတွင် ယူအေအီးတပ်များမှ အီရတ်ကို တိုက်ခိုက်သော မဟာမိတ်များနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ယူအေအီးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများမှ တိုက်ခိုက်သည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တာလီဘန် ဆန့်ကျင်ရေး စစ်ပွဲ (၂၀၀၁) ခုနှစ်နှင့် အီရတ်ရှိ ဆဒမ်ဟူစိန်အား တိုက်ခိုက်သည့် စစ်ပွဲ (၂၀၀၃) ခုနှစ် တို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဘူဒါဘီမြို့ပြင်တွင် တည်ရှိသည့် အယ်လ်ဒါဖရာ လေတပ် အခြေစိုက်စခန်းမှနေ၍ အာဖရိက ဦးချိုဒေသ တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး စစ်ပွဲ၏ စစ်ဆင်ရေးကို အထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည်။ ထိုအခြေစိုက်စခန်းသည့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲတွင် လည်းကောင်း၊ မြောက်ဖက်မျှော်ကြည့် စစ်ဆင်ရေး တွင်လည်းကောင်း မဟာမိတ်တပ်များ၏ စစ်ဆင်ရေးများကို အထောက်အပံ့ ပေးခဲ့သည်။ ယူအေအီး အနေနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ၁၉၉၄ တွင် အမေရိကန် နှင့် ၎င်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစစ်တွင် ပြင်သစ်နှင့် လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြင်သစ်နှင့် ယူအေအီးနိုင်ငံတို့သည့် အဘူဒါဘီ စော်ဘွားနယ်တွင် ပြင်သစ် အမြဲတမ်း အခြေစိုက် လေတပ်စခန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ခွင့် ပြုသည့် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ယူအေအီးသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် လစ်ဗျားအား တိုက်ခိုက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်တွင် ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ ပထမ သမ္မတဇာယတ်ဘင် စူလ်တန် အယ်လ် နာဟာယန်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ သားအကြီးဆုံး ဖြစ်သူ ရှိတ် ခါလစ်ဖာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်းမှ အဘူဒါဘီ၏ စော်ဘွား အဖြစ် ဆက်ခံခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ယူအေအီး အုပ်ချုပ်သူများ၏ ထိပ်သီးကောင်စီမှ ခါလစ်ဖာအား သမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရှိတ် မိုဟာမက် ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်းမှ ခါလစ်ဖာ၏ အဘူဒါဘီ အိမ်ရှေ့မင်းသား နေရာကို ဆက်ခံခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ယူအေအီး၏ ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် ဒူဘိုင်းနယ် အုပ်ချုပ်သူ ရှိတ် မတ်တွန်း ဘင် ရာရှစ် အယ်လ် မတ်တွန်း ကွယ်လွန်ခဲ့သဖြင့် ဒူဘိုင်း အိမ်ရှေ့မင်းသား ရှိတ် မိုဟာမက် ဘင် ရာရှစ် အယ်လ် မတ်တွန်းမှ အုပ်ချုပ်သူနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် နေရာကို ဆက်ခံ တာဝန် ယူခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပထမဆုံး နိုင်ငံတော်အဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ယူအေအီးတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ရွေးထုတ်ထားသော မဲပေးသူ အနည်းငယ်က အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ် အမျိုးသား ကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဝက်ကျော်ကို ရွေးကောက်ခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည် အခြား အာရပ်နိုင်ငံများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အာရပ်နွေဦးတော်လှန်ရေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရသော်လည်း အဲမရိတ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၁၀၀ ကျော်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တောင်းဆိုကြသဖြင့် အကျဉ်းချ နှိပ်စက် ခံခဲ့ရသည်။ ထိုမျှသာမက အချို့သူများမှာ နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမားရှိ အုပ်ချုပ်သူ မိသားစုဝင် တစ်ဦးမှ နိုင်ငံရေး အရ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန် တောင်းဆိုသဖြင့် အကျယ်ချုပ် ချထား ခံခဲ့ရသည်။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ်သော ဘာရိန်းနိုင်ငံရှိ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ယူအေအီးမှ မိမိ၏ အစိုးရကို အွန်လိုင်းတွင် လှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ ဆန္ဒပြရန် စည်းရုံးခြင်းတို့အား ဥပဒေမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၏ မြေပုံ
ဒူဘိုင်းမြို့စွန်ရှိ သဲကန္တာရ မြင်ကွင်း
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် တည်ရှိပြီး အိုမန် ပင်လယ်ကွေ့ နှင့် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့တို့နှင့် ထိစပ်လျှက် ရှိကာ အိုမန် နိုင်ငံ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ တို့ ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် မဟာဗျူဟာ ကျသော နေရာဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းများ ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်ရာ ဟော်မွတ်ဇ် ရေလက်ကြားသို့ တောင်ဘက်မှ ချဉ်းကပ်ရာ ဒေသ တလျှောက်တွင် တည်ရှိသည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံသည် မြောက်လတ္တီကျု ၂၂°၃၀' မှ ၂၆°၁၀' အတွင်း၊ အရှေ့ လောင်ဂျီကျု ၅၁° and ၅၆°၂၅′ အတွင်း တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနှင့် ၃၃၀မိုင် (၅၃၀ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသော နယ်နိမိတ်ဖြင့် အနောက်ဘက်၊ တောင်ဘက်နှင့် အရှေ့တောင်ဘက်တို့တွင် ထိစပ်ထားပြီး အိုမန်နိုင်ငံနှင့် ၂၈၀မိုင် (၄၅၀ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသော နယ်နိမိတ်ဖြင့် အရှေ့တောင်ဘက် နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်တို့တွင် ထိစပ်ထားသည်။ အနောက်မြောက်ဘက် ကွာအယ်လ်အူဒိ တွင် ကာတာနိုင်ငံနှင့် ၁၂မိုင် (၁၉ကီလိုမီတာ) မျှ နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ထိုနေရာမှာ နယ်နိမိတ်ပြဿနာ အငြင်းပွားဆဲ ဖြစ်သည်။  ဗြိတိသျှတို့ ယူအေအီးမှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် အီရန်နှင့် အငြင်းပွားဆဲ ကျွန်းများ၏ ပြဿနာမှာ မရှင်းရသေးဘဲ ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးမှ အိမ်နီးချင်း ကာတာနိုင်ငံနှင့်လည်း အခြားကျွန်းများ အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုကို အငြင်းပွားဆဲ ဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံး စော်ဘွားနယ်ဖြစ်သော အဘူဒါဘီနယ်မှာ ယူအေအီးနိုင်ငံ စုစုပေါင်း ဧရိယာ၏ ၈၇% မျှ ရှိပြီး ၂၆,၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၆၇,၃၄၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) မျှ ကျယ်ဝန်းသည်။ အသေးငယ်ဆုံး စော်ဘွားနယ်ဖြစ်သော အက်ဂျ်မန်မှာ ၁၀၀ စတုရန်းမိုင် (၂၅၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) မျှသာ ကျယ်ဝန်းသည်။ (ပုံတွင်ကြည့်ပါ။)
ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းမှာ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ တောင်ဘက်ကမ်းခြေတွင် ၄၀၄မိုင် (၆၅၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ဖြန့်ကျက် တည်ရှိသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ဆားလွင်ပြင်များ အများဆုံး ပါဝင်ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်း အတော်ဝေးဝေးထိ တည်ရှိသည်။ အကြီးဆုံး သဘာဝ ဆိပ်ကမ်းမှာ ဒူဘိုင်းတွင် တည်ရှိသော်လည်း အဘူဒါဘီ၊ ရှာဂျာနှင့် အခြားဒေသတို့တွင် ဆိပ်ကမ်းများကို သောင်တူး တည်ဆောက် ထားသည်။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ကျွန်း အများအပြား ရှိပြီး အချို့သော ကျွန်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို အီရန်နိုင်ငံ၊ ကာတာနိုင်ငံ တို့နှင့် နိုင်ငံတကာတွင် အငြင်းပွားဆဲ ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော ကျွန်းမများ နှင့်အတူ များပြားလှသော သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ရွေ့လျားနေသော သောင်ခုံများကြောင့် ရေကြောင်းသွားလာရေးကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည်။ ပြင်းထန်သောလှိုင်းနှင့် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသော လေပြင်းများကြောင့် ကမ်းခြေအနီး သင်္ဘောများ သွားလာမှုကို ပိုမို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ယူအေအီးသည် အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တွင်လည်း အယ်ဘာတီနာ ကမ်းရိုးတန်း ဖြန့်ကျက် တည်ရှိလျှက်ရှိပြီး ဟော်မွတ်ဇ် ရေလက်ကြား အာရေဗျ ကျွန်းဆွယ် ထိပ်ဆုံးရှိ မူဆန်ဒမ် ကျွန်းဆွယ်မှာမူ ယူအေအီးနိုင်ငံ ကြားခံထားသော အိုမန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ် ဖြစ်သည်။
အဘူဒါဘီနယ်၏ တောင်ဖက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့တွင် ကျယ်ပြန့်ပြီး ရွေ့လျားလျှက် ရှိသော သဲသောင်ခုံများ ဖြစ်ပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ၏ လူမနေသော ဒေသဖြစ်သော ရပ်ဘ် အယ်လ် ခါလီနှင့် ပေါင်းစပ် သွားသည်။ အဘူဒါဘီ၏ သဲကန္တာရနယ်တွင် အရေးပါသော အိုအေစစ်နှစ်ခုရှိပြီး အမြဲတမ်း နေထိုင်ရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရန် လုံလောက်သော မြေအောက်ရေကို ထိုအိုအေစစ်တို့မှ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော လီဝါ အိုအေစစ် မှာ တောင်ဘက်တွင် ရှိပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ နှင့် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ် မထားသော နယ်စပ် အနီးတွင် ဖြစ်သည်။ လီဝါ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၆၂မိုင် (၁၀၀ ကီလိုမီတာ) အကွာတွင် အယ်လ်ဘူရိုင်မီ အိုအေစစ်ရှိပြီး ၎င်းမှာ အဘူဒါဘီနှင့် အိုမန် နယ်စပ် နှစ်ဘက်စလုံးသို့ ဖြန့်ထွက်လျှက် ရှိသည်။ အိုမန်နိုင်ငံ နယ်စပ် အနီးရှိ ဇက်ဟာ ကန်မှာ လူလုပ်သော ရေကန် ဖြစ်သည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ် ထိုဒေသမှ ပြန်လည် မဆုတ်ခွာမီ အချိန်တွင် ဗြိတိသျှတို့မှ စော်ဘွားနယ် ခုနစ်ခု ကြားရှိ အတွင်းပိုင်း နယ်နိမိတ်များကို အသေးစိတ် ချပြခဲ့ခြင်းဖြင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေမည့် အငြင်းပွားမှုများကို ကြိုတင်တားဆီး​ပေးခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စော်ဘွားနယ်တို့၏ အုပ်ချုပ်သူများမှ ဗြိတိသျှတို့၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကကို လက်ခံခဲ့ပြီး အဘူဒါဘီ နှင့် ဒူဘိုင်းတို့ ကြားရှိ နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှု နှင့် ဒူဘိုင်း နှင့် ရှာဂျာ ကြားရှိ နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုတို့မှာမူ ယူအေအီးနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည် အထိ မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ အရှုပ်ထွေးဆုံး နယ်နိမိတ်များမှာ အယ်လ် ဟာဂျာ အယ်လ် ဂါဘီ တောင်ကုန်းများတွင် ဖြစ်ပြီး ထိုဒေသရှိ နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ် တစ်ဒါဇင်ခန့်ကို စော်ဘွားနယ် ၅ ခုမှ သူပိုင်သည် ငါပိုင်သည်ဟု အငြင်းပွားနေကြဆဲပင် ဖြစ်သည်။
ဒေသရင်း အပင်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များပြင်ဆင်
ဖူဂျာရာ အနီး သဲကန္တာရတွင် ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းနေသော အကေးရှားပင်များ
အိုအေစစ်များတွင် စွန်ပလွံပင်များ၊ အကေးရှားပင်များ နှင့် ယူကလစ်ပင်များ ပေါက်ရောက်လျှက် ရှိသည်။ သဲကန္တာရ ဒေသတွင် ဒေသရင်း အပင်များမှာ အလွန်ရှားပါးပြီး မြက်ပင်များနှင့် ဆူးခြုံများသာ ရှိသည်။ ဒေသခံ တိရိစ္ဆာန်များမှာ အလွန်အအမင်း အမဲလိုက်ခြင်းကြောင့် မျိုးသုဉ်းလု နီးပါး ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဘာနီရပ်စ်ကျွန်းတွင် ရှိတ် ဇာယတ် ဘင် စူလ်တန် အယ်လ် နာဟာယန်းမှ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရေ အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အချို့ တိရစ္ဆာန်များ ဆက်လက် ကျန်ရှိနေခဲ့ပြီး အာရေဗျ ဒရယ်များ နှင့် ကျားသစ်များမှာ ဥပမာ ဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းငါး နှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင် မက်ကရယ်ငါး၊ ပါ့ချ် ငါး နှင့် တူနာငါး တို့အပြင် ငါးမန်း နှင့် ဝေလငါးတို့ ပါဝင်သည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုမှာ အပူလျော့ပိုင်း ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုဖြစ်ပြီး ပူပြင်းသော နွေရာသီနှင့် နွေးထွေးသော ဆောင်းရာသီများ ရှိကြသည်။ အပူဆုံးလမှာ ဇူလိုင်လနှင့် ဩဂုတ်လတို့ဖြစ်ပြီး ကမ်းရိုးတန်း လွင်ပြင်တွင် ပျမ်းမျှ အမြင့်ဆုံး အပူချိန်မှာ ၄၅ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ် (၁၁၃ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) အထိ မြင့်မားသည်။ အယ်လ်ဟာဂျာ တောင်ကုန်း ဒေသတွင်မူ အပူချိန် လျော့နည်းပြီး ကုန်းမြေ မြင့်တက်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများ အတွင်း ပျမ်းမျှ အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်မှာ ၁၀ ဒီဂရီ မှ ၁၄ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ် အတွင်း ( ၅၀ ဒီဂရီမှ ၅၇ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် အတွင်း) ရှိသည်။ နွေနှောင်းလများ အတွင်းတွင် ရှာကီ (အရှေ့တိုင်းသားဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။) ဟု ခေါ်သော စိုထိုင်းသော အရှေ့တောင်လေကြောင့် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများတွင် နေထိုင်၍ အဆင်မပြေ ဖြစ်ရသည်။ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွင် ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန်မှာ ၄.၇ လက်မ (၁၂၀ မီလီမီတာ) ဖြစ်သော်လည်း အချို့သော တောင်ကုန်းဒေသများတွင် နှစ်စဉ်မိုးရေချိန်မှာ ၁၃.၈ လက်မ (၃၅၀ မီလီမီတာ) အထိ ရောက်ရှိတတ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် နွေလများ အတွင်း၌ တိုတောင်းပြီး သည်းထန်သော မိုးရွာကျတတ်ပြီး ထိုအတွက်ကြောင့် ရံဖန်ရံခါတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ခြောက်သွေ့သော ချောင်းခြောက်များ အတွင်းတွင် ရေလျှံတတ်သည်။ ထိုဒေသ အတွင်းတွင် မကြာခဏ ဆိုသလို ပြင်းထန်သော သဲမုန်တိုင်းများ တိုက်ခတ်တတ်ပြီး မြင်နိုင်စွမ်းကို သိသာစွာ လျော့ကျစေသည်။
ဆောင်းရာသီတွင် နှင်းကျရန် အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းငယ်မျှ ရှိသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ယူအေအီး၌ ပထမဆုံး အကြိမ် နှင်းကျခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုန်းမြင့် ဒေသများတွင် ဖြစ်သည်။ နှစ်အနည်းငယ် အကြာတွင် နှင်းနှင့် နှင်းသီးများကို ပိုမိုမြင်တွေ့လာရသည်။ ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမားရှိ ဂျီဘဲလ် ဂျိုက်စ် တောင်ကုန်း အစုအဝေးတွင်မူ နှင်းစတင် ကျဆင်းသည့် အချိန်မှစ၍ နှင်းကျဆင်းမှုကို ၂ ကြိမ်သာ ကြုံတွေ့ရသေးသည်။
ခါလစ်ဖာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်းသည် ယူအေအီး၏ သမ္မတနှင့် အဘူဒါဘီနယ်၏ စော်ဘွားဖြစ်သည်။
မိုဟာမက် ဘင် ရာရှစ် အယ်လ် မတ်တွန်းသည် ယူအေအီး၏ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဒူဘိုင်းနယ်၏ စော်ဘွားဖြစ်သည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုသည် မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အရိုက်အရာ ဆက်ခံသော သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်များ၏ ပြည်ထောင်စုဖြစ်သည်။ ထိုပြည်ထောင်စုကို အဘူဒါဘီ၊ အက်ဂျ်မန်၊ ဖူဂျာအီရာ၊ ရှာဂျာ၊ ဒူဘိုင်း၊ ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမား နှင့် အွမ်-အယ်-ကူဝိန်း နယ်တို့မှ စော်ဘွားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖက်ဒရယ် ထိပ်သီးကောင်စီမှ အုပ်ချုပ်သည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရသို့ အပ်နှင်းမထားသော တာဝန်များကို စော်ဘွာများသာ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ စော်ဘွားနယ် တစ်ခုချင်းစီမှ ဝင်ငွေ ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခုကို ယူအေအီး၏ ဗဟို ဘတ်ဂျက်သို့ ထည့်သွင်းရသည်။
သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် နေရာများမှာ ထိပ်သီးကောင်စီမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဆက်ခံခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အဘူဒါဘီနယ်၏ စော်ဘွားမှာ သမ္မတ နေရာကို ရယူပြီး ဒူဘိုင်းနယ်၏ စော်ဘွားမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးကို ရယူသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် တစ်ဦးမှ လွဲ၍ ကျန် ဝန်ကြီးချုပ်များ အားလုံးမှာ ဒု-သမ္မတ နေရာကို ပူးတွဲ တာဝန်ယူကြသည်။ ရှိတ် ဇာယတ် ဘင် စူလ်တန် အယ်လ် နာဟာယန်းမှာ ယူအေအီး နိုင်ငံ စတင်တည်ထောင်သည်မှ စ၍ ၎င်းကွယ်လွန်သည့် နေ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် အထိ ယူအေအီး၏ သမ္မတ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသူ ကွယ်လွန်ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ဖက်ဒရယ် ထိပ်သီး ကောင်စီမှ ၎င်း၏ သားဖြစ်သူ ရှိတ် ခါလီဖာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာရန်းအား ထိပ်သီးကောင်စီမှ သမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ အဘူဒါဘီ၏ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဖြစ်သော မိုဟာမက် ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာရန်းမှာ သမ္မတ နေရာကို အမွေဆက်ခံမည့် အိမ်ရှေ့စံ ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဝက်မျှ ပါဝင်သည့် ဖက်ဒရယ် အမျိုးသား ကောင်စီ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ် ထိပ်သီး ကောင်စီတွင် စော်ဘွားနယ် အားလုံးမှ ရွေးထုတ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ် ၄၀ ဦး ပါဝင်သည်။ တစ်ဝက်မှာ အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွားများမှ ခန့်အပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဝက်မှာ သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော ၂ နှစ် သက်တမ်းရှိ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဖက်ဒရယ် ထိပ်သီးကောင်စီမှာ အတိုင်ပင်ခံ အဆင့်ဖြင့်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။ ယူအေအီး၏ အီးဂါးဗားမင့် စနစ်မှာ ယူအေအီး ဖက်ဒရယ် အစိုးရအား အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀၀ ရက်တွင် အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် နှင် အဘူဒါဘီ-အင်န်ဝိုင်ယူ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ ရှမ်မာ ဘင် ဆိုဟေး ဖာရစ် အယ်လ် မပ်ဇရွီအား လူငယ်ရေးရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့ပြီး အစိုးရ အဖွဲ့တွင် အသက်အငယ်ဆုံးသော ဝန်ကြီး ဖြစ်သည်။ ရှိတ် မိုဟာမက်မှ မပ်ဇရွီသည် လူငယ်ကောင်စီ၏ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သဖြင့် လူငယ်တို့၏ မျှော်လင့်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ယူအေအီးအား မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် သက်ဦးဆံပိုင်စံနစ် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံ အဖြစ် ရည်ညွှန်းလေ့ ရှိကြသည်။ နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာမှ ယူအေအီးအား "သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်နှင့် တိုးတက်မှုတို့ဖြင့် ထွန်းပနေသော ခေတ်မီနိုင်ငံ တွဲဖက်ထားခြင်း" ဟု ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ ယူအေအီးသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာ လွတ်လတ်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတို့ကို ညွှန်ပြသော လွတ်လပ်မှုညွှန်းကိန်းတွင် အလွန် ဆိုးရွားသော အဆင့်တွင် ဖော်ပြခြင်း ခံရသည်။ ယူအေအီးသည် ဖရီးဒမ်းဟောက်စ်၏ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သော အများပြည်သူဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတို့ကို တိုင်းတာသော "ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လွတ်လပ်မှု" ညွှန်းကိန်းတွင် မလွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ် ညွှန်းဆိုခြင်း ခံရသည်။  ထို့ပြင် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့၏ နှစ်စဉ် သတင်းစာ လွတ်လပ်မှု ညွှန်းကိန်းတွင်လည်း ယူအေအီးသည် ဆိုးရွားသော အဆင့်တွင် ဖော်ပြခြင်း ခံရသည်။
ခါလစ်ဖာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်း နှင့် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင်၊ ၂၀၀၇
ယူအေအီးသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေး၊ စီးပွားရေး အရ ဆက်ဆံရေး ကျယ်ပြန့်စွာ ရှိသည်။ ယူအေအီးသည် အိုပက် အဖွဲ့ နှင့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂတို့တွင် အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပြီး ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ (GCC) ကို စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ တာလီဘန် အစိုးရကို တရားဝင် အစိုးရ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော နိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံ ထဲမှ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ (အခြား နှစ်နိုင်ငံမှာ ပါကစ္စတန် နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ တို့ ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးသည် စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်တိုင်အောင် တာလီဘန်တို့နှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည် အီဂျစ်နိုင်ငံ နှင့် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးရှိပြီး အာရပ်ကမ္ဘာမှ နိုင်ငံများတွင် အီဂျစ်၌ အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု စတင်တည်ထောင်သည့် အချိန်တွင် ပထမဆုံး တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ယူအေအီး၏ အဓိက စီးပွားဖက် နှင့် ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံ အဖြစ် ယနေ့တိုင်အောင် ဆက်လက် ရှိနေခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန် ကျွမ်းကျင် အရာထမ်း ၄ သိန်းကျော် ယူအေအီးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗ္ဗဒူလာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်းအား အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်၊ ၂၀၁၃
ယူအေအီးသည် အမေရိကန်၏ ပေါ်လစီကို ဩဇာလွှမ်းမိုး ရန်နှင့် ပြည်တွင်း ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုများကို ပုံဖော်ရန် အတွက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားနိုင်ငံများထက်ပို၍ ငွေကုန်ကြေးကျခံ ဆောင်ရွက်သောနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး  အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သော ရာထူးကြီး အစိုးရ အရာရှိများကို လခပေး၍ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်​စေလေ့ ရှိသည်။ ယူအေအီးနိုင်ငံ အတွင်း အများဆုံးသော ကျွမ်းကျင် အရာထမ်းများမှာ အိန္ဒိယ လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှ တပ်များ ယူအေအီးမှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ရုပ်သိမ်း ထွက်ခွာပြီးနောက် ယူအေအီးနိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့ပြီး အချိန်တွင် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ အတွင်းရှိ ကျွန်းများအား ပိုင်ဆိုင်မှု ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အီရန် နှင့် အငြင်းပွားခဲ့သည်။ ယူအေအီးမှ ထိုကိစ္စအား ကုလသမ္မဂ္ဂအထိ ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားသော်လည်း ကုလသမ္မဂ္ဂမှ ပယ်ချခဲ့သည်။ ယူအေအီးနိုင်ငံအတွင်း အီရန် လူမျိုး အများအပြားရှိခြင်းနှင့် စီးပွားရေး အရ ဆက်ဆံမှု ခိုင်မာခြင်းကြောင့် ထိုအငြင်းပွားမှုများသည် နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးကို များစွာ ထိခိုက်မှု မရှိစေခဲ့ပေ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတို့နှင့် အငြင်းပွားရာတွင် အီရန်နိုင်ငံမှ အဓိက ရေနံကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းဖြစ်သော ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ အပေါက်ဝရှိ ရေလက်ကြားကို ပိတ်ဆို့ရန် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ယူအေအီးမှ ဟော်မွတ်ဇ် ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းရန် မလိုသော ကုန်းတွင်း ရေနံပိုက်လိုင်းကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြင့် အီရန်တို့ ပိတ်ဆိုခဲ့ပါက ထိခိုက်မှု လျော့နည်းစေရန် အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကုန်သွယ်မှု အနေဖြင့် ကြည့်မည်ဆိုပါက ယူကေနှင့် ဂျာမနီတို့သည် ယူအေအီး၏ အကြီးဆုံးသော ပို့ကုန် တင်ပို့သည့် ဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံကြား အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမှာ နီးစပ်မှု ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံသား အများအပြားမှာ ယူအေအီးတွင် လာရောက် နေထိုင်ကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေးမှာ ယူအေအီးနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရသည့် ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံ အကြား ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ရှိကြပြီး အပြန်အလှန် ကုန်သွယ်မှု ပြုကြသည်။ ယူအေအီးမှ ဂျပန်သို့ ရေနံစိမ်းနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ တင်ပို့ရောင်းချပြီး ဂျပန်မှ ယူအေအီးသို့ ကား နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချကြသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု လေတပ်မှ အက်ဖ်-၁၆ ဘလောက် ၆၀ တိုက်လေယာဉ်ပျံ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တက္ကဆပ်ပြည်နယ် ဖို့တ်ဝေါ့သ်မြို့ရှိ လော့ဒ်ဟိမာတင် စက်ရုံမှ ပျံသန်းထွက်ခွာလာစဉ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့သည် ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်များနှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ပံ့ပိုးရောင်းချရေးတို့တွင် မဟာဗျူဟာကျ အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်လျှက် ရှိကြသည်။  ယူအေအီးသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြင်သစ်ထံမှ ရပ်ဖ်အေအယ်လ် တိုက်လေယာဉ် အစင်း ၆၀ ဝယ်ယူရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည် အမေရိကန်တို့အား ဆီးရီးယားရှိ အစ္စလာမ်နိုင်ငံ (အိုင်အက်စ်)တို့အား လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပထမဆုံး အကြိမ် တိုက်ခိုက်ရာတွင် ကူညီခဲ့သည်။
ယူအေအီး စစ်တပ်မှာ အစပိုင်းတွင် လူအနည်းငယ်သာ ရှိခဲ့သော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း သိသာစွာ များပြားလာခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ပြင်သစ်၊ အမေရိကန် နှင့် ယူကေ (ယခင်က ယူအေအီးကို ကာကွယ်ခဲ့သူ) တို့ အပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဝယ်ယူထားသော ခေတ်မီ လက်နက်စနစ်များဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ အရာရှိ အများစုမှာ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းရှိ ဆင်းဒဟတ် တော်ဝင် စစ်တက္ကသိုလ် နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဝက်စ်ပွိုင့် စစ်တက္ကသိုလ်၊ ဒန့်ထရွန်း တော်ဝင် စစ် ကောလိပ် တို့ အပြင် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ စစ်တက္ကသိုလ် ဖြစ်သော ဆောင်ဆေး စစ်တက္ကသိုလ်တို့မှ သင်တန်းဆင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ပြင်သစ်မှ အဘူဒါဘီ အခြေစိုက် လေတပ်စခန်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ယူအေအီးသည် လစ်ဗျားနိုင်ငံ အပေါ်တွင် လေယာဉ်မပျံသန်းရ ဇုန် အဖြစ် ပိတ်ပင်တားဆီးရာတွင် ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းရန် သဘောတူခဲ့ပြီး အက်ဖ်-၁၆ လေယာဉ် ၆ စင်းနှင့် ဒက်ဆု မီရာ့ဂျ် ၂၀၀၀ ဘက်စုံသုံး တိုက်လေယာဉ် ၆ စင်းတို့ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲ တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ တပ်များနှင့် စစ်ရေး ပစ္စည်းများကို ယူအေအီးနှင့် အခြား ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ ဒေသတို့တွင် အခြေစိုက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယူအေအီးသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ ဦးဆောင်သော ယီမင်နိုင်ငံရှိ ရှိယာ့စ် ဟူသစ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အုံကြွမှုတွင် ပြုတ်ကျခဲ့သော သမ္မတဟောင်း အလီ အဗ္ဗဒူလာ ဆာလေး၏ သစ္စာခံတပ်များ တိုက်ခိုက်မှုအား စစ်ရေးအရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၄ ရက် သောကြာနေ့တွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုနှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံတို့မှ စစ်သား အယောက် ၅၀ခန့် ယီမင်နိုင်ငံ အလယ်ဗဟိုရှိ မာရစ်ဘ်တွင် သေဆုံးခဲ့သည်။  အန်ဆာ အလာဟ် ဟုလည်း သိကြသော ဟူသစ်တို့မှာ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ၎င်းတို့၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆိုဗီယက်ခေတ် တို့ရှ်ကာ ရော့ကက်ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ နောင်တွင် သိရှိရသည်မှာ ထိုရော့ကက်သည် လက်နက်ထားသိုရာ နေရာသို့ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားကာ အဲမရိတ် နှင့် ဘာရိန်း တပ်သားများ သေဆုံးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသည် စော်ဘွားနယ် ၇ ခု အဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ဒူဘိုင်းနယ်မှာ လူဦးရေ အများဆုံး စော်ဘွားနယ်ဖြစ်ပြီး ယူအေအီး လူဦးရေ၏ ၃၅.၆% မျှ ရှိသည်။ အဘူဒါဘီ စော်ဘွားနယ်တွင် လူဦးရေ ၃၁.၂% မျှ ရှိသဖြင့် ယူအေအီး၏ လူဦးရေ ၃ ပုံ ၂ ပုံကျော်မှာ အဘူဒါဘီ သို့မဟုတ် ဒူဘိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။
အဘူဒါဘီသည် ဧရိယာအားဖြင့် ၂၆,၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၆၇,၃၄၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိသဖြင့် ကျွန်းများ မပါဝင်သော နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၈၆.၇% ရှိသည်။ ယူအေအီးတွင် ကမ်းရိုးတန်း အရှည်မိုင် ၂၅၀ ကျော် (၄၀၀ ကီလိုမီတာကျော်) ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အနေနှင့် အဓိက ဒေသ ၃ ခု ခွဲခြား ထားသည်။ ဒူဘိုင်းစော်ဘွားနယ်သည် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းရိုးတန်းရှိ ယူအေအီးနိုင်ငံ နယ်နိမိတ် အတွင်း ၄၅ မိုင် (၇၂ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှည်လျားသည်။ ဒူဘိုင်း၏ ဧရိယာသည် စတုရန်းမိုင် ၁,၅၀၀ (၃,၈၈၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိသဖြင့် ကျွန်းများ မပါသော နိုင်ငံ စုစုပေါင်း ဧရိယာ၏ ၅%မျှ ရှိသည်။ ရှာဂျာ စော်ဘွားနယ်သည် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းရိုးတန်းရှိ ယူအေအီးနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်း ၁၀မိုင်ခန့် (၁၆ ကီလိုမီတာခန့်) ရှည်လျားပြီး အတွင်းပိုင်းသို့ မိုင် ၅၀ ကျော် (၈၀ ကီလိုမီတာကျော်) ရှည်လျားသည်။ မြောက်ပိုင်းရှိ စော်ဘွားနယ်များ ဖြစ်သော ဖူဂျာအီရာ၊ အက်ဂျ်မန်၊ ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမား၊ အွမ်-အယ်-ကူဝိန်းတို့တွင် စုစုပေါင်း ဧရိယာ ၁,၄၉၈ စတုရန်းမိုင် (၃,၈၈၂ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။ ယူအေအီးတွင် နယ် ၂ နယ်မှ ပူးပေါင်း အုပ်ချုပ်သော ဒေသ ၂ ခု ရှိသည်။ တစ်ခုမှာ အိုမန် နှင့် အက်ဂျ်မန် တို့မှ ပူးပေါင်း အုပ်ချုပ်ပြီး အခြားတစ်ခုမှာ ဖူဂျာအီရာ နှင့် ရှာဂျာတို့မှ ပူးပေါင်း အုပ်ချုပ်သည်။
ယူအေအီး နယ်နိမိတ်များ ဝန်းရံထားသော ဝါဒီ မာဒါ ဟု ခေါ်သည့် အိုမန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ် တစ်ခု ရှိသည်။ ထိုဒေသမှာ မူဆန်ဒန် ကျွန်းဆွယ်နှင့် ကျန်ရှိသော အိုမန်နိုင်ငံ၏ အကွာအဝေး တစ်ဝက်တွင် ရှိပြီး ရှာဂျာ စော်ဘွားနယ် အတွင်း ရှိသည်။ ထိုနယ်မြေ၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၂၉ စတုရန်းမိုင် (၇၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ရှိပြီး နယ်နိမိတ်ကို ၈၁၉ ခုနှစ်ကပင် သဘောတူ ခဲ့ကြသည်။ မာဒါ၏ အရှေ့မြောက် ထောင့်စွန်းမှာ ခေါ ဖာကာ-ဖူဂျာအီရာလမ်းနှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး ၃၃ပေ (၁၀ မီတာ) မျှသာ ကွာဝေးသည်။ အိုမန်၏ နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ် မာဒါ အတွင်းတွင် ယူအေအီး၏ နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ် ဖြစ်သော နာဝါ နယ် ရှိပြီး ရှာဂျာ စော်ဘွားနယ်မှပင် ပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းမှာ ၅ စတုရန်းမိုင် (၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ) မျှ ကျယ်ဝန်းပြီး နယူးမာဒါမြို့၏ အနောက်ဘက် ဖုန်လမ်း ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုနေရာတွင် အိမ်ခြေ ၄၀ ခန့် နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းအပြင် တယ်လီဖုန်း အိတ်ချိန်း ရှိသည်။
လူဦးရေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)
စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ %
စုစုပေါင်း ဧရိယာ၏ %
အဘူဒါဘီနယ် အဘူဒါဘီမြို့ ၁,၅၄၈,၆၅၅ ၃၁.၂% ၆၇,၃၄၀ ၂၆,၀၀၀ ၈၆.၇% ၂၅
အက်ဂျ်မန်နယ် အက်ဂျ်မန်မြို့ ၃၇၂,၉၂၃ ၇.၅% ၂၅၉ ၁၀၀ ၀.၃% ၉၉၆
ဒူဘိုင်းနယ် ဒူဘိုင်းမြို့ ၁,၇၇၀,၅၃၃ ၃၆.၆% ၃,၈၈၅ ၁,၅၀၀ ၅.၀% ၃၃၆
ဖူဂျာအီရာနယ် ဖူဂျာအီရာမြို့ ၁၃၇,၉၄၀ ၂.၉% ၁,၁၆၅ ၄၅၀ ၁.၅% ၁၀၉
ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမားနယ် ရပ်စ်-အယ်လ်-ခိုင်းမားမြို့ ၁၇၁,၉၀၃ ၃.၄% ၁,၆၈၄ ၆၅၀ ၂.၂% ၁၂၂
ရှာဂျာနယ် ရှာဂျာမြို့ ၈၉၅,၂၅၂ ၁၈.၀% ၂,၅၉၀ ၁,၀၀၀ ၃.၃% ၂၆၂
အွမ်-အယ်-ကူဝိန်းနယ် အွမ်-အယ်-ကူဝိန်းမြို့ ၆၉,၉၃၆ ၁.၄% ၇၇၇ ၃၀၀ ၀.၉% ၈၈
ယူအေအီး အဘူဒါဘီမြို့ ၄,၉၆၇,၁၄၂ ၁၀၀% ၇၇,၇၀၀ ၃၀,၀၀၀ ၁၀၀% ၅၆
ယူအေအီးတွင် ဖက်ဒရယ် တရားရုံးစနစ် ရှိသည်။ တရားရုံး ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အဓိက ကဏ္ဍ ၃ ခု ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ တရားမမှု၊ ရာဇဝတ်မှု နှင့် ရှာရီယာ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ တရားရုံးတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ယူအေအီး၏ တရားစီရင်ရေး စနစ်မှာ တရားမ ဥပဒေ စနစ် နှင့် ရှာရီယာ ဥပဒေ တို့မှ ဆင့်ပွား ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တရားရုံး စနစ်တွင် အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ တရားရုံးနှင့် ရှာရီယာ တရားရုံးတို့ ရှိသည်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့၏ အဆိုအရ ယူအေအီး၏ ရာဇဝတ်မှု နှင့် တရားမမမှု ဆိုင်ရာ တရားရုံးတို့သည် ရှာရီယာ ဥပဒေ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးချ ထားပြီး ၎င်းတို့ကို ရာဇဝတ်မှု ပုဒ်မ နှင့် မိသားစု ဥပဒေ အတွင်းသို့ ပုဒ်မ အဖြစ် ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်း ထား၍ အမျိုးသမီးများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပြုထားသည်ဟု ဆိုသည်။
ရာဇဝတ်မှုများ ဖြစ်သော ကြာခိုမှု၊ လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် အရက်သောက်သုံးမှုများ အတွက် ကြိမ်ဒဏ်ကို ပြစ်ဒဏ် တစ်ခု အနေနှင့် သတ်မှတ်သည်။ ရှာရီယာတရားရုံးမှ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ မှ ၂၀၀ အထိ ပေးခြင်းကို တရားဝင် အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ လူတစ်ယောက်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေရန် နှုတ်ဖြင့် စော်ကားခြင်းမှာ တရားမဝင်ဘဲ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ အပြစ်ပေးနိုင်သော အမှု ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကြားတွင် ယူအေအီးရှိ လူအမြောက်အများ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ လတ်တလော ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား နှစ်ဦးမှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား ရိုက်ပုတ်ခြင်းနှင့် စော်ကားခြင်း ပြုသဖြင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်း တစ်ဦးအား အဘူဒါဘီတွင် အရက်သောက်၍ မတ်တပ်သွား ကလေးငယ် တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် နှင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရသည်။ မွတ်စလင်များ အတွက် အရက်သောက်ခြင်းသည် တရားမဝင်ဘဲ ကြိမ်ဒဏ် ၈၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလိုပင် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၄၀ အပြစ်ပေးလေ့ ရှိသည်။ တရားမဝင်သော လိင်ဆက်ဆံမှု အတွက် ရံဖန်ရံခါတွင် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၆၀ အပြစ်ပေးလေ့ရှိသည်။ စော်ဘွားနယ် အချို့တွင် ကြိမ်ဒဏ် ပေးသည့် အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် အချက် ၈၀ ပေးလေ့ ရှိသည်။ ရှာရီယာ တရားရုံးမှလည်း အိမ်ဖော် အလုပ်သမားများကို ကြိမ်ဒဏ် အပြစ်ပေးလေ့ ရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုး အိမ်အကူ အမျိုးသမီးမှာ တရားမဝင် ပဋိသန္ဓေ ဆောင်မှုဖြင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အရက်မူး၍ ကားမောင်းခြင်းကို အလွန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပြီး ကျူးလွန်ပါက ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ ချမှတ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်း အများစုမှာ အရက်မူး၍ ကားမောင်းခြင်းကြောင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ ချမှတ်ခြင်း ခံကြရသည်။ အဘူဒါဘီတွင် လူမြင်ကွင်း၌ နမ်းရှုံ့ခြင်းအတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ ပေးခြင်း ခံရသောသူ အများအပြား ရှိသည်။ ယူအေအီး၏ ဥပဒေတွင် လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုခြင်း အတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။
ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ခြင်းမှာ ယူအေအီးတွင် ဥပဒေ အရ ခွင့်ပြုထားသော အပြစ်ပေးမှု ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာရှမှ အိမ်အကူ တစ်ဦးအား ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ရန် အဘူဒါဘီတွင် အမိန့်ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အခြားသော နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်းများမှာလည်း ကြာခိုမှုကြောင့် ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ရန် အမိန့်ချခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကြားတွင် ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ရန် အမိန့်ချခံရသူ အချို့ ရှိသည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းမှာ ဥပဒေ အရ တရားမဝင်ဘဲ အများဆုံး ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ နှင့် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် အထိ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သော အမှုဖြစ်သည်။ လတ်တလောနှစ်များတွင် တရားမဝင် လိင်ဆက်ဆံမှုများ၌ ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ရန် အပြစ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရပြီးနေနာက် လူအချို့မှ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံ၍ အယူခံဝင်ခြင်းကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။ ကြာခိုမှု အတွက် ပြစ်ဒဏ်မှာ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရှိသူများ အတွက် ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ်ရန် ဖြစ်သည်။
မိသားစု ဆိုင်ရာ အမှုအခင်းများတွင် စီရင်ပိုင်ခွင့်သည် ရှာရီယာ တရားရုံးတွင်သာ ရှိပြီး အချို့သော ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများ ဖြစ်သော ကြာခိုမှု၊ လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ဓားပြမှု၊ အရက် သောက်သုံးမှုနှင့် အခြား ဆက်စပ်နေသော ပြစ်မှုများတွင်လည်း စီရင် ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ရှာရီယာ ဥပဒေတွင် အခြေခံထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခြေအနေ ဥပဒေသည် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ ကွာရှင်း ပြတ်စဲခြင်း နှင့် ကလေးငယ်အား အုပ်ထိန်းခြင်း အစရှိသော ကိစ္စရပ်များ အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အစ္စလာမ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခြေအနေ ဥပဒေသည် မွတ်စလင်များအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု ရှိသကဲ့သို့ မွတ်စလင် မဟုတ်သူများ အပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ မွတ်စလင် မဟုတ်သော နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်းများသည်လည်း လက်ထပ်ခြင်း၊ ကွာရှင်းခြင်း နှင့် အုပ်ထိန်းခြင်း စသော ကိစ္စရပ်များ အတွက် ရှာရီယာ ဥပဒေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ခံကြရလေ့ ရှိသည်။
ဘာသာတရားအား စွန့်လွှတ်ခြင်း သည် ယူအေအီးတွင် သေဒဏ် ကျခံစေနိုင်သော ပြစ်မှု ဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားအား လှောင်ပြောင်ပြောဆိုခြင်းကိုလည်း ဥပဒေ အရ တားမြစ်ထားပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာကို စော်ကားသော နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်းများမှာ နိုင်ငံမှ ပြန်ပို့လေ့ ရှိသည်။ ယူအေအီးသည် ရှာရီယာ ဥပဒေမှ ဟူဒတ်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ အဖြစ် ထည့်သွင်းထားပြီး ဘာသာတရားအား စွန့်လွှတ်ခြင်း သည်လည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ယူအေအီး၏ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁ နှင့် ၆၆ တို့ အရ ဟူဒတ် ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို သေဒဏ် အပြစ်ပေးရန် ပြဋ္ဌာန်း ထားသဖြင့် ဘာသာတရားအား စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် ယူအေအီးတွင် သေဒဏ် အပြစ်ပေးနိုင်သော ပြစ်မှု ဖြစ်လေသည်။
အချို့သော အမှုအခင်းများတွင် ယူအေအီးရှိ တရားရုံးများတွင် မုဒိမ်းမှုများကို တိုင်ကြားသော အမျိုးသမီးများအား ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗြိတိသျှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် အမျိုးသား ၃ ဦးမှ အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကို တိုင်ကြားသည့် အခါ အရက်သောက်သည့် ရာဇဝတ်မှုဖြင့် တရားစွဲခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အခြားသော ဗြိတိသျှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ မုဒိမ်းမှုကို တိုင်ကြားသည့် အခါတွင် အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ နေရာတွင် မူးယစ်ခြင်းနှင့် အိမ်ထောင်ပြင်ပ လိင်ဆက်ဆံမှုဖြင့် တရားစွဲခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဩစတြေးလျ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာလည်း အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းမှုကို တိုင်ကြားသဖြင့် ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အခြားသော အမှုအခင်း တစ်ခုတွင် အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် အဲမရိတ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ အမျိုးသား ၆ ဦးမှ အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားခြင်းကို တရားစွဲဆိုသူမှ ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် နှင့် ကြိမ်ဒဏ် အပြစ်ပေးရန် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သဖြင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီးမှာ ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် ကျခံခြင်း ခံခဲ့ရသသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် နော်ဝေ အမျိုးသမီး မာတီ ဒါလတ်ဗ်မှ မုဒိမ်းမှုကို တိုင်ကြားသည့် အခါတွင် တရားမဝင် လိင်ဆက်ဆံခြင်း နှင့် အရက်သောက်ခြင်းအတွက် ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အခြားသော အမျိုးသမီးများကို ခွဲခြားဆက်ဆံထားသော ဥပဒေများလည်း ရှိသည်။ အဲမရိတ် အမျိုးသမီးများသည် လက်ထပ်ရန် နှင့် နောက်တစ်ကြိမ် လက်ထပ်ရန် အမျိုးသား အုပ်ထိမ်းသူထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် လိုအပ်သည်။ ထိုလိုအပ်ချက်မှာ ရှာရီယာ ဥပဒေမှ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဖက်ဒရယ် ဥပဒေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စော်ဘွားနယ် အားလုံးတွင် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးများမှ မွတ်စလင် မဟုတ်သော အမျိုးသားကို လက်ထပ်ခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ယူအေအီးတွင် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးနှင့် မွတ်စလင် မဟုတ်သော အမျိုးသားတို့ လက်ထပ်ခြင်းမှာ မှောက်မှားမှု ဟု ယူဆပြီး ဥပဒေအရ အပြစ် ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။
လူမြင်ကွင်းတွင် နမ်းရှုံ့ခြင်းအား ဥပဒေ အရ တားမြစ်ထားပြီး ကျူးလွန်ပါက နိုင်ငံအတွင်းမှ နှင်ထုတ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းတွင် လာရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကြသော နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်းများမှာ လူမြင်ကွင်းတွင် နမ်းရှုံ့ခြင်းကြောင့် ပြန်ပို့ခြင်း ခံကြရသည်။ အဘူဒါဘီတွင်မူ လူမြင်ကွင်းတွင် နမ်းရှုံခြင်းကြောင့် စုံတွဲတစ်တွဲအား ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ အပြစ်ပေးခဲ့ဖူးသည်။ ယူအေအီးတွင် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော ဖက်ဒရယ် ဥပဒေအရ Whatsapp (ဝှပ်စ်အပ်) ပေါ်တွင် ဆဲဆိုခြင်းကို တားမြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၆၈,၀၆၁ နှင့် ညီမျှသော ဒဏ်ငွေ နှင့် ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်းများကိုမူ ပြန်ပို့လေ့ ရှိသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဩစတြေးလျ လူမျိုး အရာထမ်း တစ်ဦးမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်တွင် ဆဲဆိုခြင်းကြောင့် ပြန်ပို့ ခံခဲ့ရသည်။
လိင်တူခြင်း ချစ်ကြိုက်ခြင်းကို ဥပဒေ အရတားမြစ်ထားပြီး လိင်တူချစ်ကြိုက်ခြင်းမှာ ယူအေအီးတွင် သေဒဏ် အပေးခံရနိုင်သော ပြစ်မှု ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အဲမရိတတ် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ဂေး ကဲ့သို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရပြီး တရားစွဲဆိုခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အဘူဒါဘီ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၈၀ အရ သဘာဝ အတိုင်း မဟုတ်သော လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ် အထိ အပြစ်ပေးနိုင်ပြီး ဒူဘိုင်း ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၇၇ အရမူ နှစ်ဦးသဘောတူ ဖြစ်သော်လည်း သဘာဝ မဟုတ်သော လိင်ဆံဆက်ခြင်းကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် အထိ အပြစ်ပေးနိုင်သည်။
ကိုယ်လက်အင်္ဂါကို ဖြတ်တောက်၍ အပြစ်ပေးခြင်းမှာ ယူအေအီးတွင် ရှာရီယာ တရားရုံး အရ တရားဝင် သော အပြစ်ဒဏ် ဖြစ်သည်။ ကားစင်တင်သတ်ခြင်းမှာ ယူအေအီးတွင် တရားဝင် အပြစ်ဒဏ် ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ အပိုဒ် ၁ တွင် အယူဝါဒ ဆိုင်ရာ အပြစ်ပေးမှုများ၊ ဆိုးရွားသော အပြစ်ပေးမှုများ နှင့် သွေးစွန်းသော ငွေကြေးများအတွက် အစ္စလာမ် ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အတိုင်း ကျင့်သုံးရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ စော်ဘွားနယ် တစ်ခုချင်းစီမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မများသည် ဖက်ဒရယ် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေမှသာ ဖက်ဒရယ် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မကို ရုပ်သိမ်းလေ့ ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဖက်ဒရယ် ဥပဒေ နှင့် စော်ဘွားနယ် ဥပဒေ နှစ်ရပ်စလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
ရာမဒန် ဥပုသ်လ အတွင်း နေထွက်ချိန်မှ နေဝင်ချိန်အထိ လူမြင်ကွင်းတွင် အစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း နှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့ကို ဥပဒေဖြင့် တားမြစ်ထားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များနှင့် ကလေးသူငယ်များကို ခြွင်းချက် ပေးထားသည်။ ထိုဥပဒေမှာ မွတ်စလင် အပြင် မွတ်စလင် မဟုတ်သူများ အတွက်လည်း အကျုံးဝင်ပြီး  မလိုက်နာပါက အဖမ်းခံရနိုင်သည်။ လူမြင်ကွင်းတွင် ကခုန်ခြင်းကိုလည်း ယူအေအီးတွင် ဥပဒေဖြင့် တားမြစ်ထားသည်။ 
ကြိမ်ဒဏ် နှင့် ကျောက်ခဲဖြင့် ထုသတ် အပြစ်ပေးခြင်းမှာ ယူအေအီးတွင် ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသော အပြစ်ပေးမှုများဖြစ်သည်။ ထို အပြစ်ဒဏ်များကို ရှာရီယာ ဥပဒေမှ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဖက်ဒရယ် ဥပဒေတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ အချို့သော ယူအေအီးရှိ အိမ်အကူ အလုပ်သမားများမှာ ရှာရီယာ တရားစီရင်မှု၏ အပြစ်ပေးမှုများ ဖြစ်သော ကြိမ်ရိုက်ခြင်း နှင့် ကျောက်ခဲထုသတ်ခြင်းတို့ အတွက် သားကောင်များ ဖြစ်သွားရသည်။ ဖရီးဒမ်းဟောက်စ်မှ နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေသော အစီရင်ခံစာ ဖြစ်သည့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လွတ်လပ်မှု အစီရင်ခံစာတွင် ယူအေအီးအား "မလွတ်လပ်" ဟူသော ကဏ္ဍအောက်တွင် နှစ်စဉ် ထည့်သွင်း ထားသည်မှာ ပထမဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သော ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စ၍ပင် ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးသည် အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေးမှ လွတ်ကင်းခဲ့သော်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် တောင်းဆိုကြသော အဲမရိတ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အယောက် ၁၀၀ ကျော်မှာ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ၍ ညှင်းပန်း နှိပ်စက် ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ယူအေအီး အစိုးရသည် တိတ်တဆိတ် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခြင်းများကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားသား အမြောက်အများနှင့် အဲမရိတ်နိုင်ငံသားများမှာ အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်။ ယူအေအီး အစိုးရမှ ထိုသူများအား ဖမ်းဆီးထားကြောင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို ဖုံးကွယ်ထားကာ ထိုသူများအား ဥပဒေ၏ အကာအကွယ် အပြင်ဘက်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့မှ ယူအေအီး အစိုးရ၏ တိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီးခြင်း နှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတို့မှာ အလွန်စိုးရိမ်စရာ ကောင်းသော အခြေအနေရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
အာရပ် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းမှ "ယူအေအီးမှ တိတ်တဆိတ် ဖမ်ဆီးခြင်း နှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း" အစီရင်ခံစာအတွက် တရားခံတို့ထံမှ သက်သေ အထောက်အထားများကို ရယူထားခဲ့ပြီး ထိုသူတို့မှ ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး အကျဉ်းစခန်းများတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း နှင့် စော်ကားခြင်းများ ခံခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပုံ ၁၆ မျိုးကို ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကျင်စက်ဖြင့်တို့မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်း နှင့် ဆေးကုသမှု ရယူနိုင်ရန် ငြင်းပယ်ခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အဲမရိတ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၉၄ ယောက်တို့မှာ လျှို့ဝှက် အကျဉ်းစခန်းများတွင် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရပြီး အစိုးရအား ဖြုတ်ချရန် ကြိုးစားသည်ဟု စွပ်စွဲကာ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ထို တရားစွဲဆိုမှုများ၏ လျှို့ဝှက်မှုများကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ သူ၏ ဖခင် တရားခံများထဲတွင် ပါဝင်သော အဲမရိတ်နိုင်ငံသား တစ်ဦးမှ ထိုတရားစွဲမှု ကိစ္စအား တွိ လုပ်ခဲ့သည့် အတွက် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် သူ့အား ထောင်ဒဏ် ၁၀ လ အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး အနေဖြင့် တိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းတွင် အဘူဒါဘီမှ ညီအစ်မ သုံးဦး ပါဝင်သည်။
ယူအေအီးအစိုးရ၏ စွပ်စွဲချက်ဖြစ်သော ယူအေအီးနိုင်ငံသားများ နှင့် နိုင်ငံခြားသားများ ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံအား မတည်မငြိမ် ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေသည် ဆိုသော အချက်ကို ထင်ရှားစေရန် အတွက် အဲမရိတ် နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများအားလည်း ဖိနှိပ်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားသားများမှာလည်း ပြန်ပို့ခြင်း ခံကြရသည်။  ယူအေအီးတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသော အီဂျစ် နှင့် အခြားနိုင်ငံခြားသားများအား ရက်အနည်းငယ်သာ အချိန်ပေး၍ နိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်ခွာစေသော မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ ရှိသည်။
လစ်ဗျား နိုင်ငံသား နှစ်ဦး နှင့် ကာတာ နိုင်ငံသား နှစ်ဦး အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသားများမှာလည်း တိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ကာတာ အမျိုးသားများမှာ ယူအေအီးအစိုးရ၏ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကို ခံကြရပြီး ထိုသူများ မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို အစိုးရမှ မိသားစုများ မသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်သွင်း အကျဉ်းချကာ နှင်ထုတ်ခံရသူများ ထဲတွင် လူသိများသော ဘလော့ဂါ နှင့် တွစ်တာ နာမည်ကျော် တစ်ဦး ဖြစ်သူ အီယတ်-အယ်လ်-ဘတ်ဒါဒီလည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ယူအေအီး အာဏာပိုင်များမှ ဖမ်းဆီး၍ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချကာ နိုင်ငံအတွင်းမှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ ယူအေအီးတွင် တသက်တာလုံး နေထိုင်ခဲ့သော ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း သူ့တွင် အမိန့်အတွက် ပြန်လည် စောဒက တက်ခွင့် မရှိခဲ့ပေ။ သူ့အား ပါလက်စတိုင်း နယ်မြေသို့ ပြန်ပို့ရန် မဖြစ်နိုင်သည့် အတွက် မလေးရှားသို့ နှင်ထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ယူအေအီး အစိုးရမှ ပြင်သစ် ဆယ်ကျော်သက် ယောက်ျားလေး တစ်ဦးအား အဲမရိတ်နိုင်ငံသား ၃ ဦးမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ထိုသူများထဲမှ တစ်ဦးမှာ အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ပေါ့ဇတစ် ရှိနေသည်ကိုလည်း ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သံတမန်ရေးအရ ဖိအားပေးမှုကြောင့် အဲမရိတ် မုဒိမ်း သမားများ ဖမ်းဆီးခံရပြီး အပြစ်ပေးခြင်း ခံကြရသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ဗွီဒီယို အခွေတစ်ခွေအား ယူအေအီးမှ တိတ်တဆိတ် ခိုးထုတ်လာခဲ့ပြီး ထိုဗွီဒီယိုတွင် ရှိတ် အစ်ဆာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်း မှ လူတစ်ဦး (မိုဟာမက် ရှား ပူး) အား ကြာပွတ်၊ လျှပ်စစ် နွားနှင်တံ နှင့် သံချောင်းများ ထိုးထွက်နေသော သစ်သားပြားတို့ဖြင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ကားဖြင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖြတ်ကြိတ်နေသည်ကို ပြထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အစ်ဆာသည် တရားရုံးသို့လာပြီး အပြစ်မရှိကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ အမှုမှာ ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး အစ်ဆာအား မိုဟာမက် ရှားပူး အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အတွက် အပြစ် မရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး အဖွဲ့မှ ထိုအမှုကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အစိုးရအား ယူအေအီး လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြား အာဏာပိုင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့် စွပ်စွဲချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် လွတ်လပ်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထိုဆုံးဖြတ်ချက် အတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး အဲမရိတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ လူများ အားလုံး "တရားဥပဒေ ရှေ့မှောက်တွင် အညီအမျှ ရှိရမည်" ဟု ဆိုခဲ့ကာ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အား ဂရုတစိုက် ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်နှင့် ထိုအမှုအား တရားမျှတမှု အပြည့်အဝ ရှိကြောင်း သေချာအောင် ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
လတ်တလော နှစ်များတွင် ရှီယာ့ မွတ်စလင် ကိုးကွယ်သော နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်း များစွာကို ယူအေအီးမှ ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် လက်ဘနွန်မှ ရှီယာ့ မိသားစုများမှာ ပြန်ပို့ခံခဲ့ကြရပြီး ဟေဇဘိုလာ သူပုန်များကို စာနာသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်း ခံကြရသည်။ အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဆိုအရ လတ်တလောနှစ်များတွင် ရှီယာ့ နိုင်ငံခြား အရာထမ်း ၄၀၀၀ ကျော်မှာ ယူအေအီးမှ ပြန်ပို့ခြင်း ခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
အမျိုးသမီး အိမ်အကူ ဝန်ထမ်းများအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကား နှောင့်ယှက်ခြင်းမှာ အခြား စိုးရိမ်ဖွယ် ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အိမ်အကူ ဝန်ထမ်းများမှာ ၁၉၈၀ခုနှစ် ယူအေအီး အလုပ်သမား ဥပဒေ ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အလုပ်သမား ဥပဒေကြမ်းဖြင့် လည်းကောင်း အကာအကွယ် ပေးထားခြင်း မရှိပေ။ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြပါက ဖိနှိပ်ခံကြရပြီး တရားဥပဒေ ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ မရဘဲ ဆန္ဒပြသူများကို ထောင်သွင်း အကျဉ်းချလေ့ ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာတွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုအား အချို့သော လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာများ အတွက် အာရုံစိုက် ရေးသားထားသည်။ ၎င်းတို့ အသားပေး ဖော်ပြထားသည်မှာ အစိုးရ၏ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်နှင့် စုဝေးခွင့်ကို ကန့်သတ်မှု၊ ထင်ရာမြင်ရာ ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု တို့နှင့်အတူ သေဒဏ် အပြစ်ပေးမှု အကြောင်းတို့ ဖြစ်သညည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒူဘိုင်းရဲတို့မှ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံသား သုံးဦးအား မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ရိုက်နှက်ခြင်း နှင့် လျှပ်စစ် ကျင်စက်ဖြင့် တို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း မှ ထိုအမှုအား စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ယူအေအီး သမ္မတ ရှိတ် ခါလီဖာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်း ယူကေသို့ နိုင်ငံတော် ခရီး လာရောက်သော အခါတွင် ထပ်မံ မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုလူ ၃ ဦးအား အပြစ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးထားရာမှ ၂၀၁၃ ဇူလိုင်လတွင် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ခါလီဖာ မိုးမျှော်တိုက်တွင် အလုပ်လုပ်နေကြသော တောင်အာရှ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများ
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား ယူအေအီး၌ ဆက်ဆံပုံကို ခေတ်သစ် ကျွန်စနစ် အဖြစ် ပုံခိုင်းလေ့ ရှိကြသည်။ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် ယူအေအီး၏ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများတွင် အကျုံးမဝင်သဖြင့် အဓမ္မခိုင်းစေခြင်း ခံရပါက ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိပေ။ ယူအေအီးရှိ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် မရှိပေ။ ထို့ပြင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား သပိတ်မှောက်ခြင်းမှလည်း တားမြစ်ထားသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သမား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာမှာ ဆန္ဒပြသဖြင့် ပြန်ပို့ခြင်း ခံကြရသည်။ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ သမဂ္ဂသို့လည်း ဝင်ရောက်ခွင့် မရှိ၊ ဆန္ဒပြခွင့်လည်း မရှိသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှုကို ကန့်ကွက်ရန် နည်းလမ်း မရှိကြပေ။ ဆန္ဒပြသူများမှ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံရမည့်ဘေးနှင့် ပြန်ပို့ခံရမည့် ဘေးတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ကြရရသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်မှ ကုလသမဂ္ဂသို့ ယူအေအီးရှိ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ထောင်ပေါင်းများစွာအား ကျွန်ကဲ့သို့ ခိုင်းစေခံနေရခြင်းကို စုံစမ်းရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် လမ်းပေါ်ရှိ မတော်တဆမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီး ဒေသခံ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးမှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တိုက်မိသော ဗွီဒီယို တစ်ခုအား ယူကျုဘ်၌ တင်ထားခဲ့သည်။ ဒေသခံ ယာဉ်မောင်းမှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းအား ၎င်း၏ ဦးခေါင်းဆောင်းအား ကြာပွတ်သဖွယ် အသုံးပြု ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး မခံချိ မခံသာ ဖြစ်အောင် ပြောဆိုနေသည်မှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာများမှ ဝင်ရောက် မတားမြစ်မီ အချိန် အထိ ဖြစ်သည်။ ခဏမျှ အကြာတွင် ဒူဘိုင်းရဲတို့မှ ထိုဗွီဒီယိုကို ရိုက်ကူးသူအား ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုဒေသခံ ယာဉ်မောင်းမှ ယူအေအီး အစိုးရမှ ရာထူးကြီး ဝါကြီး ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကို အများ သိရှိလာခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ဒူဘိုင်းနှင့် ၎င်းတို့မြို့ နေထိုင်သူများအား အဆိုးဘက်မှ ပုံဖော်ထားသည့် ယူကျုဘ်တွင် တင်ထားသော ဟာသ ဗွီဒီယို တစ်ခု အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံသား တစ်ဦးနှင့် ယူအေအီး နိုင်ငံသား အချို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဗွီဒီယိုမှာ ဆက်တ်ဝါ ဒေသတွင် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒူဘိုင်းမှ ဂိုဏ်း အဖွဲ့များ ရိုးရှင်းသော လက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် သင်ကြား ပြသနေပုံ ဖြစ်ပြီး ထိုရိုးရှင်းသော လက်နက်များတွင် ဖိနပ် စသည် တို့လည်း ပါဝင်သည်။. ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံသားများ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် အတွက် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခံကြရသည်။ ဩစတြေးလျ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ တရားမဝင် ပါကင်ထိုးထားသော ကားတစ်စင်း၏ ပုံကို တင်မိရာမှ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် မကောင်း ရေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ သူမသည် နောင်တွင် ယူအေအီးမှ ပြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်။
ယူအေအီး၏ နိုင်ငံတော် လုံခြံရေး ယန္တရားမှာ အဓမ္မဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထင်ရာမြင်ရာ ဖမ်းဆီးခြင်း နှင့် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း အစရှိသော ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်သည်ဟု အစွပ်စွဲခံကြရသည်။ နောက်ဆုံး အဖြစ်အပျက်မှာ တူရကီ နိုင်ငံသား စီးပွားရေး သမား ဒေါက်တာ အေမာ အယ်လ် ရှာဝါ အား ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်တွင် တိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုလည်း တင်းကျပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသည်။ အားလုံးသော အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူမှုရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန မှ တဆင့် မှတ်ပုံတင်ရသဖြင့် နိုင်ငံ၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်သို့ အလိုလို ရောက်ရှိသွားသည်။ ထိုနယ်မြေဒေသအတွင်း နိုင်ငံရေးမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း အခု ၂၀ ခန့်မှာ မှတ်ပုံမတင်ဘဲ လုပ်ဆောင် နေကြသည်။ အသင်းအဖွဲ့များ အားလုံးမှာ ဆင်ဆာ သတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရပြီး ထုတ်ဝေသည့် စာစောင်များမှာလည်း အစိုးရထံမှ ဦးစွာ ခွင့်ပြုချက် ရယူရသည်။
စီးခရက် ဒူဘိုင်း ဆိုသော ဘလော့ခ်မှာ ဒူဘိုင်းတွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၀ အထိ သီးသန့် ရပ်တည်နေသော ဘလော့ခ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုဘလော့ခ်မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဘလော့ခ်ရပ်ဝန်းတွင် ကြည့်ရှုသူ များပြားသော ဘလော့ခ် တစ်ခု အဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည်မှာ ယူအေအီး ဆက်သွယ်ရေး စည်းကြပ်မှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကို တားဆီးပိတ်ပင်လိုက်သည့် အချိန်အထိပင် ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးတွင် အလယ်အလတ်မျှသော ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ကန့်သတ်ချက် ရှိသည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ကန့်သတ်ချက်မှာ ဒူဘိုင်း ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးရှိ ကုန်တိုက် အများစုတွင် အဝင်ဝ၌ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ကန့်သတ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။  ဒူဘိုင်းရှိ ကုန်တိုက်များတွင် အမျိုးသမီးများ အနေနှင့် ၎င်းတို့၏ ပုခုံးနှင့် ဒူးခေါင်းတို့ကို ဖုံးလွှမ်းသော အဝတ်များကို ဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် လက်ပြတ် ဝင်ဆင်၍ မရပေ။ ယူအေအီး၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ကန့်သတ်ချက် အရ အမျိုးသမီးများအား တိုတောင်းသော ဘောင်းဘီတိုများ ဝတ်ဆင်ခွင့် မပြုပေ။
ထို့ပြင် ပြည်သူများအား အဘူဒါဘီရှိ ရှိတ် ဇာယတ် ဗလီကဲ့သို့သော ဗလီများထဲသို့ ဝင်ရောက်ရာ၌ သင့်တင့်သော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး ဝတ်စားကြရန် ပန်ကြားထားသည်။
ဖရီးဒမ်းဟောက်စ်၏ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် ဖော်ပြရာတွင် ယူအေအီး၏ မီဒီယာအား "လွတ်လပ်မှု မရှိ" ဆိုသော အဆင့်ဖြင့် နှစ်စဉ် သတ်မှတ်လေ့ ရှိသည်။ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များ အဖွဲ့ ၏ နှစ်စဉ် သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် ညွှန်းကိန်းတွင် ယူအေအီးသည် ဆိုးရွားသော အဆင့်မှ အမြဲပါဝင်လေ့ ရှိသည်။ ဒူဘိုင်း မီဒီယာ စီးတီးနှင့် တူးဖိုးဖိုက်ဖိုး တို့သည် ယူအေအီး၏ ပင်မ မီဒီယာဇုံများ ဖြစ်ကြသည်။ ယူအေအီးသည် အာရပ်တစ်ခွင်လုံးသို့ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်သော ရုပ်သံလွှင့်ဌာန အချို့ အခြေစိုက်ရာ ဖြစ်ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရုံသံလွှင့် စင်တာ နှင့် အော့ဘစ် ရှိုးတိုင်း ကွန်ယက်တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ရှိတ် မိုဟာမက် ဘင် ရာရှစ် အယ်လ် မက်တွန်းမှ သတင်းသမားများအား ၎င်းတို့၏ အလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များ အတွက် တရားစွဲဆိုခြင်း နှင့် ထောင်သွင်း အကျဉ်းခြခြင်း မရှိစေရဟု အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ယူအေအီးမှ အများပြည်သူ အေးချမ်းသာယာရေးကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သော အွန်လိုင်း အချက်အလက်များကို ဖြန့်ဖြူးခြင်းအား တရားဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အစိုးရအား ဝေဖန်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပေ။ အစိုးရ အရာရှိများနှင့် တော်ဝင် မိသားစုဝင်များကို ဝေဖန်ခြင်း အားလည်း ခွင့်မပြုပေ။ နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သရေကို ညှိုးနွမ်းအောင် သို့မဟုတ် ပျက်စီးအောင် ပြုလုပ်သူများနှင့် ဘာသာရေးအား မလေးမစား ပြုသူများ အား ​ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးလေ့ ရှိသည်။ နိုင်ငံရေး ပယောဂပါသည့် သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို စွက်ဖက်ခြင်းများ အများအပြား ရှိသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယူအေအီး နယ်မြေခံ (အစိုးရ အရာရှိ ) တစ်ဦးမှ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား တစ်ဦးအား ရိုက်နှက်သည်ကို ဗွီဒီယို ရိုက်ကူး၍ ယူကျုဘ်သို့ လွှင့်တင်သော ယူကျုဘ် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ခါလီဖာ မိုးမျှော်တိုက်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတို့ပြုလုပ်သမျှတွင် အမြင့်ဆုံးသော အဆောက်အဦး ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးသည် ဂျီစီစီ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံး စီးပွားရေး ရှိသောနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး  ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန် တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၇၇ ဘီလီယံ (အဲမရိတ် ဒေါ်လာ ၁.၃၈ ထရီလီယံ) မျှ ရှိသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရသည့် အချိန်မှစ၍ ယူအေအီး၏ စီးပွားရေးသည် ၂၃၁ ဆ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အဲမရိတ် ဒေါ်လာ ၁.၄၅ ထရီလီယံမျှ ရှိလာခဲ့သည်။  ယူအေအီးသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုမှ ထုတ်ဝေသော ၂၀၁၆ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေး နှင့် အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များအရ စီးပွားရေး လုပ်ရန် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများတွင် အဆင့် ၃၁ နေရာမှ ဖော်ပြခြင်း ခံရသည်။
ယူအေအီးသည် ဂျီစီစီ နိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေး အားဖြင့် နယ်ပယ် အစုံဆုံး ဖြစ်သော်လည်း ယူအေအီး၏ စီးပွားရေးမှာ ရေနံ အပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေရဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းမှ လွဲ၍ ယူအေအီး၏ အခြားဒေသများမှ ရေနံမှ ရသော အမြတ်ငွေပေါ်တွင်မှာ မှီခိုနေရသည်။ ဓာတ်ဆီ နှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့တို့သည် စီးပွားရေးတွင် ပင်မ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အဘူဒါဘီ အတွက် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ယူအေအီး၏ စီးပွားရေး ၈၅% မှာ ရေနံ တင်ပို့မှု ပေါ်တွင်သာ အခြေခံသည်။ အဘူဒါဘီနှင့် အခြားသော ယူအေအီး စော်ဘွားနယ်တို့သည် စီးပွားရေး နယ်ပယ် ဖြန့်ကျက်ရာတွင် ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ကြသော်လည်း ရေနံ နည်းပါးသည့် ဒူဘိုင်းသည် စီးပွားရေး နယ်ပယ် ဖြန့်ကျက်ရာတွင် ပိုမို ရဲတင်းစွာ လုပ်ဆောင်လေ့ ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရေနံ တင်ပို့မှုသည် ယူအေအီး နိုင်ငံ ဘတ်ဂျက်၏ ၇၇% မျှ ရှိသည်။ စီးပွားရေး နယ်ပယ် ဖြန့်ကျက် ရန် အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ခြင်း မှ ဂျီဒီပီအား ရေနံ တင်ပို့မှုပေါ်သို့ မှီခိုနေခြင်းအား ၂၅% အထိ လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းသည် ၂၀၀၇-၂၀၁၀ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွင် ထိခိုက်ခဲ့ပြီး အဘူဒါဘီ၏ ရေနံ ကြွယ်ဝမှု ဖြင့် ကယ်တင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် ဖက်ညီ ဘတ်ဂျက် ရှိသဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ညွှန်ပြလျှက် ရှိသည်။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ယူအေအီး၏ စီးပွားရေး တစ်ခုလုံးအတွက် တိုးတက်မှု ပြနေသည့် ကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတို့ အများဆုံး လာရောက် လည်ပတ်ရာ နေရာ ဖြစ်သည်။ မာစတာ ကတ်ဒ်၏ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာတဝှမ်း အရောက်သွားရာ မြို့တော်များ ညွှန်းကိန်း၌ ဒူဘိုင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီသွားတို့ အတွက်ပဉ္စမမြောက် ရေပန်း အစားဆုံး နေရာ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် ယူအေအီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း စီးပွားရေး၏ ၆၆% ကို ရယူထားပြီး အဘူဒါဘီမှာ ၁၆% နှင့် ရှာဂျာမှာ ၁၀% တို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းသည် ၂၀၁၃ တွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည် ၁၀ သန်းကို လက်ခံခဲ့သည်။
ယူအေအီးတွင် ဒေသအတွင်း၌ အတိုးတက်ဆုံးနှင့် အဆင့်မြင့်ဆုံး အခြေခံ အဆောက်အအုံ ရှိသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှစ၍ ယူအေအီးသည် အခြေခံ အဆောက်အအုံအတွက် ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်း မြောက်များစွာ သုံးစွဲခဲ့သည်။ ထိုတိုးတက်မှုများမှာ စော်ဘွားနယ် အကြီးများ ဖြစ်သော အဘူဒါဘီနှင့် ဒူဘိုင်းတို့တွင် ပို၍ ထင်ရှားသည်။ မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ စော်ဘွားနယ်များမှာလည်း နောက်မှ လိုက်လာလျှက် ရှိနေကြပြီး လူနေရန်နှင့် စီပွားရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်သူများကို အဓိက အခွင့်အရေးများ ပြန်လည် ပေးအပ်လျှက် ရှိသည်။
အစိုးရ၏ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော ဒူဘိုင်းဝေါလ်မှ အကြွေးပေးရန် အချိန်ဆွဲသည့် အခါတွင် ဒူဘိုင်းရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးများ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ စီးပွားရေးမှာ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများ နှင့်ပင် ရပ်တည်နေရပြီး အဲမရိတ် အလုပ်သမား များဖြင့် အစားထိုးရန် ကြိုးစားခြင်းမှာလည်း ကောင်းကျိုး အနည်းငယ်သာ ရရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယူအေအီး ဥပဒေမှ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ခွင့်ပြုမထားပေ။ စုပေါင်း၍ ညှိနှိုင်းခွင့်နှင့် စုပေါင်း၍ ဆန္ဒပြခွင့်တို့ကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုမထားပေ။ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားများအား အလုပ်ခွင်တွင် အတင်းအကျပ် ပြန်ဆင်းခိုင်းရန် အတွက် အခွင့် အာဏာ ရှိသည်။ ဆန္ဒပြခြင်းတွင် ပါဝင်သော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရပြီး ပြန်ပို့ ခံရလေ့ ရှိသည်။  ထိုမျှသာမက အလုပ်သမား အရေးများနှင့် စပ်လျဉ်းပါက ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဥပဒေ လွန်စွာ နည်းပါးသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကဏ္ဍရှိ အလုပ်နေရာများတွင် အဲမရိတ်များ နှင့် အခြား ဂျီစီစီ အာရပ်နိုင်ငံသားများ နှိုင်းယှဉ်ပါက ယှဉ်ပြိုင်သူများလောက် အရည်အချင်း သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ချင်စိတ် မရှိသော်လည်း အဲမရိတ် နိုင်ငံသား များကို ဦးစားပေး ခန့်ထားလေ့ရှိသည်။ အမှန်တကယ်တွင် အဲမရိတ် နိုင်ငံသား အလုပ်သမား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သည် အစိုးရ ရာထူးများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး ကျန်သူများထဲမှ အတော်များများမှာ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော အဲမရိတ် လေကြောင်းလိုင်း နှင့် ဒူဘိုင်း အိမ်ရာ တို့တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နေကြသည်။
အကောင်းဘက်မှ ပြောရမည်ဆိုလျှင် လတ်တလော Bayt.com ၏ စစ်တမ်းအရ ယူအေအီးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၅၆% မှာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟု ယူဆလျှက် ရှိကြသည်။
ဒူဘိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာ ခရီးသည် ဖြတ်သန်းမှုတွင် အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး လန်ဒန် ဟိသရိုး လေဆိပ်ကို ကျော်တက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၇၅၀မိုင် (၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှည်လျားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြတ်သန်းကာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အဓိက မြို့ကြီးများနှင့် ဆိပ်ကမ်းမြို့များကို ဆက်စပ်ထားသည့် နိုင်ငံတော် ရထားလမ်းမှာ ဖောက်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်း မက်ထရိုသည် အာရပ်ကျွန်းဆွယ်တွင် ပထမဆုံး မြို့ပြ ရထား ကွန်ယက် ဖြစ်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုရှိ အဓိက ဆိပ်ကမ်းများမှာ ခါလီဖာ ဆိပ်ကမ်း၊ ဇာယတ်ဆိပ်ကမ်း၊ ဂျီဘဲလ် အလီ ဆိပ်ကမ်း၊ ရာရှစ် ဆိပ်ကမ်း၊ ခါလစ် ဆိပ်ကမ်း၊ ဆာအိ ဆိပ်ကမ်း နှင့် ခိုရ်ဖာကန် ဆိပ်ကမ်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ယူအေအီးတွင် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ နှစ်ခုရှိပြီး အဲတီစလတ် နှင့် ဒူဟု ခေါ်သော အဲမရိတ် အင်တီဂရိတ်တက် တယ်လီကွန်မျူနီကေးရှင်း ကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်သည်။ ယခင်က အဲတီစလတ်သည် တစ်ဦးတည်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၇ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ဒူ မှ မိုဘိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်သည် အထိ ဖြစ်သည်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၀.၉၀၄ သန်းမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၂.၆၆ သန်းအထိ တိုးမြင့်လာလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ စည်းကမ်းကြီးကြပ်သူဖြစ်သော တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့မှ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဖော်ပြပါရှိသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များကို ကန့်သတ်ထားရန် မလုပ်မနေရ အမိန့်ထုတ်ထားသည်။
ယူအေအီးသည် အိတ်စပို ၂၀၂၀ ကို ဒူဘိုင်းတွင် ကျင်းပရန် အတွက် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင် တင်သွင်းရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာ ဒေသအတွင်းတွင် ယခင်က မရှိခဲ့ဖူးသော ကိစ္စတရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ အိတ်စပိုသည် ကမ္ဘာ့တဝှမ်းမှ လူများ တွေ့ဆုံ၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ဝေမျှခြင်း နှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊ အစဉ်တစိုက် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုများ နှင့် ဘဝ အရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်ခြင်း အစရှိသာ ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း ရှေ့ဆက်ရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သော ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အိတ်စပိုများသည် စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် လူမှုရေး ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုများ အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပြီး အိမ်ရှင်နိုင်ငံ နှင် အိမ်ရှင်မြို့ တို့အတွက် အမှတ်ရစရာ အမွေ တစ်ခု အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့စေသည်။
ယူအေအီး၏ လူဦးရေ ပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု ပုံစံမှာ အလွန်ပင် ထွေပြားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ယူအေအီး၏ ခန့်မှန်း လူဦးရေမှာ ၈,၂၆၄,၀၇၀ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် ၁၃% မျှသာ ယူအေအီး နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် အဲမရိတ်များ ဖြစ်ကြပြီး လူဦးရေ၏ ရာခိုင်နှုန်း အများစုမှာ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှုန်းမှာ ၂၁.၇၁ ဖြစ်သဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ယူအေအီး၏ ဖက်ဒရယ် ဥပဒေ ၁၇၏ အပိုဒ် ၈ အရ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများမှာ ယူအေအီးတွင် အနှစ် ၂၀ နေထိုင်ပြီးပါက နိုင်ငံသား အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လိုအပ်ချက်များမှာ ပြစ်မှု တစ်ခါမျှ ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိရန် နှင့် အာရပ်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်ရန် တို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယနေ့ကာလတွင် နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို အလွယ်တကူ ပေးလေ့ မရှိဘဲ နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သော လူအများအပြားမှာ ဘီဒွန်းဟု ခေါ်သော နိုင်ငံမရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။
အဲမရိတ်နိုင်ငံသား ၁.၄ သန်း ရှိသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်သော လူဦးရေမှာ အမျိုးမျိုး အထွေထွေ ဖြစ်သည်။ စီအိုင်အေ၏ အဆိုအရ ၁၉% မှာ အဲမရိတ် လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး ၂၃%မှာ အခြား အာရပ်များဖြစ်သော အီဂျစ်လူမျိုးများ၊ ဂျော်ဒန်လူမျိုးများ နှင့် အီရန်လူမျိုးများ တို့ ဖြစ်ကြကာ ၅၀% မှာ တောင်အာရှသားများ ဖြစ်ပြီး ၈%မှာ အခြားသော လူမျိုး ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကာ အနောက်တိုင်းသား များနှင့် အရှေ့အာရှသားများ ဖြစ်ကြသည်။ (၁၉၈၂ ခန့်မှန်းချက်အရ)
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အဲမရိတ် နိုင်ငံသားများမှ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၁၆.၅% မျှ ရှိပြီး တောင်အာရှသားများ( ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ) မှာ အများဆုံး အစု ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း၏ ၅၈.၄% မျှ ရှိကာ အခြားအာရှသားများ ဖြစ်သော ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အီရန်နိုင်ငံသားများ မှာ လူဦးရေ၏ ၁၆.၇% မျှ ရှိပြီး အနောက်တိုင်းသား အရာထမ်းများမှာ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၈.၄% မျှ ရှိသည်။
အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများမှာ ဒူဘိုင်း၊ ရှာဂျာ နှင့် အက်ဂျ်မန် အစရှိသော စော်ဘွားနယ် သုံးခုတွင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၃ ပုံ ၁ပုံကျော် (၃၇%) မျှ ရှိသည်ကို ယူရိုမော်နီတာ အင်တာနေရှင်နယ် အမည်ရသော ဈေးကွက် သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှ ပြောကြားထားသည်။ ထို စော်ဘွားနယ် ၃ ခုတွင် အများဆုံး တွေ့ရသော နိုင်ငံသားများမှာ အိန္ဒိယ (၂၅%) ၊ ပါကစ္စတန် (၁၂%)၊ အဲမရိတ် (၁၂%)၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (၇%)၊ ဖိလစ်ပိုင် (၅%) တို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။
ဥရောပ သားများ နေထိုင်မှုမှာလည်း တိုးပွားလျှက် ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှု စုံလင်သော ဒူဘိုင်းကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများတွင် ဖြစ်သည်။ ဥရောပ၊ ဩစတြေးလျ၊ မြောက်အမေရိက နှင့် လက်တင်အမေရိကတို့မှ အနောက်တိုင်းသား ဝန်ထမ်းများမှာ ယူအေအီး လူဦးရေ အတွင်း ၅၀၀,၀၀၀ မျှ ရှိသည်။ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံသား ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် နိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင်လျှက် ရှိသည်။ ကျန်ရှိသော လူဦးရေမှာ အာရပ်နိုင်ငံများမှ ဖြစ်သည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၏ လူဦးရေ ၈၈%မှာ မြို့ပြတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စာရင်း အရ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၇၆.၇ နှစ် ဖြစ်သဖြင့် အခြား မည်သည့် အာရပ်နိုင်ငံထက် မဆို မြင့်မားသည်။ ယောက်ျား မိန်းမ အချိုးမှာ စုစုပေါင်း လူဦးရေ အတွက် ၂.၂ ဖြစ်ပြီး ၁၅ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အတွင်း လူဦးရေ အတွက် ၂.၇၅ ဖြစ်သဖြင့် ယူအေအီး၏ ကျားမ မညီမျှမှုမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကာတာနိုင်ငံ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးရှိ ဘာသာတရားများ (ပြူး သုတေသန)
အစ္စလာမ်သည် အမျာဆုံး နှင့် ယူအေအီး၏ နိုင်ငံတော် ဘာသာ ဖြစ်သည်။ အစိုးရသည် အခြား ဘာသာဝင်များကို လက်ခံသော ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးပြီး မွတ်စလင် မဟုတ်သူများ၏ ကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲသည်။ ထို့အတူပင် မွတ်စလင် မဟုတ်သူများ အနေနှင့်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့် မွတ်စလင်များအား အစ္စလာမ်ဘာသာ အတိုင်း ကြီးပြင်းအောင် မွေးမြူခြင်းတို့ကို ဝင်ရောက် မစွက်ဖက်ရန် တားမြစ်သည်။
အစိုးရသည် အခြားဘာသာ တရားများ ပြန့်ပွားစေရန် မည်သည့်မီဒီယာကို မဆို အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ပြီး ထိုသို့သော လုပ်ရပ်ကို သိမ်းသွင်းခြင်းဟု မှတ်ယူသည်။ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ၃၁ ကျောင်း၊ ဘာ ဒူဘိုင်းတွင် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း တစ်ခု၊  ဂျီဘဲလ် အလီတွင် ဆစ်ခ ဂုရုဒွာရ ကျောင်းတစ်ခုနှင့် အယ်လ် ဂါဟွတ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိသည်။
စီးပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၀၅ ခုနှစ် စာရင်းအရ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၇၆%မှာ မွတ်စလင်၊ ၉% မှာ ခရစ်ယာန် နှင့် ၁၅% မှာ အခြား (အဓိက အားဖြင့် ဟိန္ဒူ) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ လူဦးရေ စာရင်းတွင် ခေတ္တလာလည်သူများ နှင့် အလုပ်သမား များကို ထည့်သွင်း ရေတွက်ချင်း မရှိဘဲ ဘာဟိုင်း နှင့် ဒရုဇ် တို့ကို မွတ်စလင် အဖြစ် ထည့်သွင်း ရေတွက်သည်။ အဲမရိတ် နိုင်ငံသားများတွင် ၈၅% မှာ ဆွန်နီ မွတ်စလင်များ ဖြစ်ကြပြီး ၁၅%မှာ ရှီယာ့ မွတ်စလင်များ ဖြစ်ကြကာ ရှီယာ့ အများစုမှာ ရှာဂျာ နှင့် ဒူဘိုင်းတို့တွင် စုစည်းလျှက် ရှိသည်။ အိုမန်မှာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့မှာ အီဘာဒီများ ဖြစ်ပြီး ဆူဖီတို့၏ အယူအဆများလည်း လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုရှိ အကြီးဆုံး မြို့တော် နှင့် မြို့ကြီးများ
၂၀၀၈ တွက်ချက်ခြင်း (some figures up to 2012)
အဘူဒါဘီမြို့ ၁ ဒူဘိုင်းမြို့ ဒူဘိုင်းနယ် ၂,၁၀၆,၅၃၃ ၁၁ ခိုရ်ဖာကန်မြို့ ရှာဂျာနယ် ၅၃,၆၃၅
၂ အဘူဒါဘီမြို့ အဘူဒါဘီနယ် ၁,၉၃၅,၂၃၄
၃ ရှာဂျာမြို့ ရှာဂျာနယ် ၁,၃၃၂,၄၅၅
၄ အယ်လ်အန်မြို့ အဘူဒါဘီနယ် ၅၈၀,၀၀၀
၅ အက်ဂျ်မန်မြို့ အက်ဂျ်မန်နယ် ၄၀၃,၉၂၃
၆ အယ်လ်ဂါဘီယာမြို့ အဘူဒါဘီနယ် ၂၉၀,၄၅၀
၇ ရပ်စ် အယ်လ် ခိုင်းမား ရပ်စ် အယ်လ် ခိုင်းမား ၂၃၀,၉၀၃
၈ ဖူဂျာအီရာမြို့ ဖူဂျာအီရာနယ် ၁၄၅,၉၄၀
၉ ဒစ်ဘာမြို့ ဖူဂျာအီရာနယ် ၇၈,၂၀၀
၁၀ အွန် အယ်လ် ကူဝိန်းမြို့ အွန် အယ်လ် ကူဝိန်းနယ် ၇၂,၉၃၆
အာရပ်ဘာသာစကားသည် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၏ နိုင်ငံတော် ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ အဲမရိတ်နိုင်ငံသားတို့သည် အာရပ်ဘာသာစကားကို ပင်လယ်ကွေ့ပုံစံ ပြောဆိုကြသည်။  ထိုဒေသကို ဗြိတိသျှတို့က ၁၉၇၁ အထိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သဖြင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားမှာ ယူအေအီးတွင် အများသုံး ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း အလုပ်အတော်များများကို လျှောက်နိုင်ရန် အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တတ်ကျွမ်းရန် လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်း အမျိုးမျိုးတို့ နေထိုင်ကြသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားများကိုလည်း သုံးနှုန်းခြင်းများ ရှိသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ ဒေရာအရပ်ရှိ ရိုးရာ လေဟာပြင်ဈေး
အဲမရိတ် ယဉ်ကျေးမှုသည် အာရပ် ယဉ်ကျေးမှု ပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး ပါရှား၊ အိန္ဒိယ နှင့် အရှေ့အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှုတို့မှလည်း လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။ အာရပ် နှင့် ပါရှား ပုံစံယူထားသော ဗိသုကာ လက်ရာတို့မှာ ဒေသခံ အဲမရိတ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကို ပြဆိုနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အဲမရိတ် ယဉ်ကျေးမှုတွင် ပါရှား ယဉ်ကျေးမှု အငွေ့အသက်များ ဖုံးလွမ်းနေသည်ကို ရိုးရာ အဲမရိတ် ဗိသုကာ လက်ရာများနှင့် ကျေးလက် အနုပညာတို့တွင် သိသာစွာ တွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘာဂျီးလ် ခေါ် လေခံများမှာ ရိုးရာ အဲမရိတ် ဗိသုကာ ပညာ၏ အမှတ်အသား တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ပါရှား ဗိသုကာ၏ ဩဇာ သက်ရောက်မှု တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုတွင် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်း ရှိသည်။ ဒူဘိုင်း၏ အဓိက အားလပ်ရပ်များတွင် ရာမဒန် ဥပုသ်လကို ကုန်ဆုံးသည့် နေ့ဖြစ်သော အစ်နေ့ နှင့် အမျိုးသားနေ့ သို့မဟုတ် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုကို စတင်တည်ထောင်သည့် နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် တို့ ပါဝင်ကြသည်။ အဲမရိတ်အမျိုးသားများမှာ ခြေချင်းဝတ်ထိ ရှည်လျားပြီး အဖြူရောင် သိုးမွေး သို့မဟုတ် ချည်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော ကန်ဒူရာခေါ် အဝတ်အစားကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး အဲမရိတ် အမျိုးသမီး များမှာမူ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အတော်များများကို ဖုံးလွှမ်းထားသော အပေါ်ဝတ် ဖြစ်သည့် အာဘာယာကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ရှေးခေတ် အဲမရိတ် ကဗျာများတွင် ၈ ရာစု အာရပ် ပညာရှင် အယ်လ် ခါလေး ဘင် အာမက်၏ လွှမ်းမိုးမှုများကို အထင်အရှား တွေ့ရသည်။ ယူအေအီးတွင် အစောဆုံး အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ထားသော ကဗျာဆရာမှာ အီဘင် မာဂျစ် ဖြစ်ပြီး ၁၄၃၂ ခုနှစ် နှင့် ၁၄၃၇ ခုနှစ်ကြားတွင် ရပ်စ် အယ်လ် ခိုင်းမား၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးသော အဲမရိတ် စာရေးဆရာများမှာ မူဘာရတ် အယ်လ် အိုခေးလီ (၁၈၈၀-၁၉၅၄)၊ ဆာလမ် ဘင် အလီ အယ်လ် အိုဝိုက်စ် (၁၈၈၇-၁၉၅၉) နှင့် အာမက် ဘင် ဆူလာယမ် (၁၉၀၅-၁၉၇၆) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဟီယာ အဖွဲ့ဟု သိကြသော ရှာဂျာမှ ကဗျာဆရာ သုံးဦးမှာ အပိုလို နှင့် အချစ်ကဗျာများတို့၏ လွှမ်းမိုးမှု အထင်အရှား ရှိသည်ကို ကို တွေ့နိုင်သည်။ ရှာဂျာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာအုပ်ပွဲတော်သည် နိုင်ငံအတွင်း ရှေးအကျဆုံး နှင့် အကြီးကျယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုရှိ ပြတိုက်များတွင် ဒေသအတွင်း နာမည်ရှိသော ပြတိုက် အချို့ ရှိပြီး နာမည် အကျော်ကြားဆုံးမှာ ရှာဂျာရှိ ပြတိုက် ၁၇ ခု ပါဝင်သော အမွေခံ နယ်မြေ ဖြစ်ကာ  ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အာရပ်ကမ္ဘာ၏ ယဉ်ကျေးမှု မြို့တော် အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ဒူဘိုင်းတွင်မူ အယ်လ်ကွာရပ်ဇ် တွင် ပန်းချီပြခန်း အများ အပြား ရှိပြီး ဆယ်လ်ဆာလီ ပုဂ္ဂလိက ပြတိုက် ကဲ့သို့သော ပြတိုက်များလည်း ရှိသည်။ အဘူဒါဘီတွင်မူ ဆာဒီယတ်ကျွန်းပေါ်တွင် ယဉ်ကျေးမှု ရပ်ကွက်ကို တည်ထောင်ထားသည်။ စီမံကိန်း အကြီးစား ၆ ခုကို စီစဉ်နေပြီး ဂူဂန်ဟိုင်း အဘူဒါဘီ နှင့် လိုဗာ အဘူဒါဘီတို့ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းတွင် ကွန်းစ်သဲလ် ပြတိုက်နှင့် ပြခန်းများ အနုပညာရှင်များ အတွက် ရပ်ကွက် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေသည်။
ယူအေအီး၏ ရိုးရာအက ဖြစ်သော ယိုဝါလာ
အဲမရိတ် ယဉ်ကျေးမှုသည် အရှေ့ အာရေဗျ ယဉ်ကျေးမှု၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လီဝါသည် ဒေသအတွင်း သီဆိုကခုန်လေ့ ရှိသော ဂီတ နှင့် အက အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး အာဖရိက ဂရိတ်လိတ် ဒေသမှ ဘန်တူလူမျိုးတို့မှ ဆင်းသက်လာသော အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အဓိက ဖြစ်သည်။  ဒူဘိုင်း ကန္တာရ ရော့ခ် ဂီတ ပွဲတော်သည် ဟဲဗီး မက်တယ်လ် နှင့် ရော့ခ် ဂီတပညာရှင်များ ပါဝင်သော အဓိကပွဲတော် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုတွင် ရုပ်ရှင်ရုံ အနည်းငယ်သာ ရှိသော်လည်း တိုးချဲ့လျှက် ရှိသည်။
အဲမရိတ်တို့၏ ရိုးရာအစားအစာမှာ ထမင်း၊ ငါးနှင့် အသားတို့သာ အမြဲဖြစ်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုရှိ လူများမှာ ၎င်းတို့၏ အစားအစာများကို အနောက်နှင့်တောင် အာရှနိုင်ငံများမှ မွေးစားထားပြီး အီရန်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ပါကစ္စတန် နှင့် အိုမန် နိုင်ငံတို့မှ ပါဝင်သည်။ ပင်လယ်စာမှာ အဲမရိတ်တို့၏ အဓိက အစားအစာအဖြစ် ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာကပင် ရှိခဲ့သည်။ အသား နှင့် ထမင်းတို့မှာ အခြား ပင်မ အစားအစာများ ဖြစ်ကာ သိုးကလေးသား နှင့် သိုးသား တို့ကို ဆိတ်သား နှင့် အမဲသားတို့ထက် ပို၍ နှစ်ခြိုက်ကြသည်။ ထင်ရှားသော သောက်စရာများမှာ ကော်ဖီ နှင့် လက်ဖက်ရည်တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ဖာလာ၊ ကုံကုမံ နှင့် ပူဒီနာတို့ဖြင့် အရသာ ဖြည့်စွက်ကာ သိသာသော အရသာ ထွက်အောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ အမြန်ပြင် အစားအစာများမှာ လူငယ်များ အကြားတွင် ရေပန်းစားလွန်းလှသဖြင့် အမြန်ပြင် အစားအစာများ အလွန်အကျွံ စားသုံးခြင်း သည် အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကို မီးမောင်းထိုး ပြသမည့် ကန်ပိန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင် နေရသည်။ အရက်ကို ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဘားများတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။ နိုက်ကလပ် အားလုံးမှာ အရက်ရောင်းရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ အချို့သော စူပါမားကက်များတွင် အရက်ရောင်းချခွင့် ပြုထားသော်လည်း သီးခြားနေရာတွင် ရောင်းချသည်။ အရက်ကို သောက်သုံးနိုင်သော်လည်း လူအများရှေ့တွင် မူးရူးနေခြင်း နှင့် မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရာတွင် သွေးထဲ၌ အရက် ရှိနေခြင်းတို့အား ဥပဒေမှ တားမြစ်ထားသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒူဘိုင်း တင်းနစ် ချန်ပီယံ လုပွဲ
ဘောလုံး ကစားနည်းမှာ ဒူဘိုင်းတွင် ရေပန်းစားသော အားကစားနည်း တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အယ်လ်နာဆာ အက်စ်စီ၊ အယ်လ်အန်၊ အယ်လ် ဝါဆယ်၊ အယ်လ် ရှပ်ဘတ် ၊ အယ်လ် ရှာဂျာ၊ အယ်လ်ဝါဒါ၊ အယ်လ် အာလီ တို့မှာ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးသော ကလပ်အသင်းများ ဖြစ်ကြပြီး ဒေသအတွင်း ချန်ပီယံ အဖြစ် အချိန်ကာလ ကြာမြင့်စွာ နာမည် ရခဲ့သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်တတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်း၏ အချိန်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကို အသုံးချ၍ ဘောလုံး ကစားနည်းကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ လူငယ် အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ဘောလုံးကစားသမားများသာမက ဒေသတွင်း အသင်းများရှိ တာဝန်ရှိသူများနှင့် နည်းပြများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းသည် ၁၉၉၀တွင် အီဂျစ် အသင်းနှင့် အတူ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲအတွက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်ခဲ့သည်။ ထိုကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အာရပ်နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံ တပြိုင်တည်း ခြေစစ်ပွဲ အောင်ခြင်း အနေနှင့် ၃ ကြိမ်မြောက် ဆက်တိုက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကူဝိတ် နှင့် အယ်လ်ဂျီးရီးယား အသင်းတို့မှာ ၁၉၈၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲတွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၆ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲတွင် အီရတ် နှင့် အယ်လ်ဂျီးရီးယား အသင်းတို့မှာလည်းကောင်း အသီးသီး ခြေစစ်ပွဲ အောင်ခဲ့ကြသည်။ ယူအေအီးသည် ပင်လယ်ကွေ့ ဖလား ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲတွင် ဖလား ၂ ကြိမ် ရရှိခဲ့ပြီး ပထမ ဖလားမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အဘူဒါဘီတွင် ကျင်းပသော ပွဲတွင်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ ဖလားမမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ဘာရိန်းတွင် ကျင်းပသော ပွဲတို့တွင် လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ယူအေအီး အနေနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အေအက်ဖ်စီ အာရှ ဖလားကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ခရစ်ကက် ကစားနည်းမှာလည်း ယူအေအီးတွင် ရေပန်းအစားဆုံး ကစားနည်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး တောင်အာရှ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၊ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း နှင့် ဩစတြေးလျ မှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်း အများအပြား ရှိခြင်းမှာ အဓိက အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ရှာဂျာရှိ ရှာဂျာ ခရစ်ကက် အသင်း အားကစားကွင်း၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက်စ် ခရစ်ကက် ပြိုင်ပွဲကို ၄ ကြိမ်တိုင်အောင် အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အဘူဒါဘီရှိ ရှိတ်ဇာယတ် ခရစ်ကက် ကစားကွင်းတွင်လည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရစ်ကက် ကစားပွဲများကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းတွင် ခရစ်ကက်ကွင်း အမှတ် ၁ နှင့် ၂ ဆိုသော ခရစ်ကက် ကစားကွင်း ၂ ခုရှိပြီး တတိယမြောက် ဖြစ်သော ဒီအက်စ်စီ ခရစ်ကက် ကစားကွင်းမှာ ဒူဘိုင်း အားကစား မြို့တော်၏ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရစ်ကက် ကောင်စီ ရုံးစိုက်ရာ မြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ယူအေအီး အမျိုးသား ခရစ်ကက် အသင်းသည် ၁၉၉၆ ခရစ်ကက် ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် အရည်အချင်းစစ် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ခရစ်ကက် ကမ္ဘာ့ဖလား အရည်အချင်းစစ် အောင်မြင်ရန် သီသီလေး လွဲခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် တွင် ကျင်းပသော ၂၀၁၅ ခရစ်ကက် ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် အရည်အချင်းစစ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နောက်ပုံစံ တစ်မျိုး ကျင်းပသော အာရှဖလား ခရစ်ကက် ပြိုင်ပွဲသည် ၂၀၁၆ မတ်လ ပထမပတ်တွင် ကျင်းပနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ဖော်မြူလာဝမ်း ကားမောင်းပြိုင်ပွဲသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင် ရေပန်းစားပြီး မျက်စိပသာဒ ဖြစ်စရာ ယက်စ် မရီနာ ဆားကစ် တွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ ရှိသည်။ ပြိုင်ပွဲကို ညနေခင်းတွင် ကျင်းပပြီး နေ့အလင်းရောင်တွင် စတင်ကာ ညဘက်တွင် ပြီးဆုံးသော ပထမဆုံး သော ဂရန်းပရီ ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်သည်။ အခြား ရေပန်းစားသော အားကစားနည်းများတွင် ကုလားအုတ်ပြိုင်ခြင်း၊ သိမ်းငှက်ပြိုင်ခြင်း၊ ခရီးကြမ်း မြင်းစီးခြင်း နှင့် တင်းနစ်တို့ ပါဝင်သည်။ ဒူဘိုင်း စော်ဘွားနယ်တွင် အဓိက ဂေါက်ကွင်း ၂ ခု ရှိပြီး ဒူဘိုင်း ဂေါက်ကလပ် နှင့် အဲမရိတ် ဂေါက်ကလပ် တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ယခင်က ကလေးငယ်များကို ကုလားအုပ်စီးနှင်းသူ အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသဖြင့် ဝေဖန်မှု အများ အပြား ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ယူအေအီးမှ ကလေးငယ်များကို ထိုကစားနည်းတွင် အသုံးပြုချင်းကို တားမြစ်ခဲ့ပြီး နှစ်အနည်းငယ် အကြာတွင် ကလေးငယ်များအားလုံးကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အန်ဆာ ဘာနေးအား ထိုကိစ္စတွင် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုအတွက် မကြာခဏ ချီးကျူးခြင်း ခံရသည်။
ဖိုင်:American University of Sharjah (AUS) 4.jpg
ရှာဂျာ အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းသား စင်တာ
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဘူဒါဘီမှလွဲ၍ အခြား စော်ဘွားနယ် အားလုံးတွင် ပညာရေးစနစ်ကို အထက်တန်း အထိ ကြီးကြပ်သည်။ အဘူဒါဘီတွင်မူ အဘူဒါဘီ ပညာရေး ကောင်စီ၏ အာဏာ အောက်တွင် ရှိသည်။ ကျောင်းများတွင် မူလတန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း နှင့် အထက်တန်းကျောင်းတို့ ရှိသည်။ အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ ကျောင်းများကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ပြီး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရေးဆွဲထားသည်။ အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ ကျောင်းများတွင် အာရပ်ဘာသာစကားဖြင့် သင်ကြားပို့ချပြီး အင်္ဂလိပ် ဘာသာအား ဒုတိယ ဘာသာစကား အဖြင့် အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်သည်။ နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုသော ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများလည်း အများအပြား ရှိသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကျောင်းများမှာ ယူအေအီး နိုင်ငံသားများ အတွက် အခမဲ့ ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများ၏ လခမှာမူ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသည်။
အဆင့်မြင့် ပညာရေး စနစ်အား အဆင့်မြင့်ပညာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်သည်။ ထိုဝန်ကြီး ဌာန အနေနှင့် ကျောင်းသားများကို ဘွဲ့ကြို တက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့် ပြုရာတွင်လည်း တာဝန်ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် လူကြီး စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၉၀% ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ရှိသော လူကြီး ပညာရေး စင်တာ ၈၆ ခုတွင် နိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများစွာ ပညာသင်ကြားလျှက် ရှိကြသည်။ 
ဒူဘိုင်း ကျန်းမာရေးမြို့တော်သည် ကုသရေး နှင့် တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးတို့အတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ် ထားသည်။
ယူအေအီး၌ မွေးစတွင် လူတစ်ဦး၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၇၈.၅ နှစ် ဖြစ်သည်။ နှလုံးသွေးကြော နှင့် ဆိုင်သော ရောဂါများသည် ယူအေအီးတွင် အဓိက သေဆုံးရသည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း သေဆုံးမှု၏ ၂၈% ဖြစ်ကာ အခြား အဓိက အကြောင်းများမှာ မတော်တဆမှုများ နှင့် ထိခိုက်မှုများ၊ ကင်ဆာ နှင့် မွေးရာပါ ရောဂါတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒေတာများ အရ ယူအေအီး လူကြီးများ၏ ၃၇.၂% မှာ ဆေးပညာ ရှုထောင့်အရ အဝလွန်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပြီး ဘီအမ်အိုင် ၃၀ နှင့် အထက် ရှိသည်။ 
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဘူဒါဘီ နှင့် ဒူဘိုင်းတို့ကဲ့သို့ သီးခြား ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့မရှိဘဲ ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင်ရှိနေသော မြောက်ပိုင်း စော်ဘွားနယ်များ အတွက် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် ၅ နှစ် ကျန်းမာရေး မဟာဗျူဟာကို ဖော်ထုတ် ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုမဟာဗျူဟာမှ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပေါ်လစီများကို တညီတညွတ်တည်း ပေါင်းစည်းရန်၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်တင့်သော နှုန်းထားဖြင့် ရရှိနိုင်ရေးကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ဆေးကုသရေး အပေါ် မှီခိုခြင်းအား တစ်ချိန်တည်းတွင် လျှော့ချရန် အာရုံစိုက် ရေးဆွဲထားသည်။ ဝန်ကြီး ဌာနမှ လက်ရှိ ဆေးရုံ ၁၄ ခုတွင် နောက်ထပ် ၃ ခု ထပ်တိုးရန်၊ အခြေခံ ကျန်းမာရေး စင်တာ လက်ရှိ ၈၆ ခုအား ၂၉ ခု ထပ်တိုးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။
အဘူဒါဘီတွင် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့အား မှီခိုသူများ အတွက် မယူမနေရ ကျန်းမာရေး အာမခံ ထားရှိစေခြင်းမှာ ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီ အပြောင်းအလဲတွင် အဓိက တွန်းအား တစ်ခု ဖြစ်သည်။အဘူဒါဘီ နေထိုင်သူများသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ထို အစီအစဉ် အောက်၌ စတင် အကျုံးဝင်ခဲ့ပြီး ဒူဘိုင်းမှ ၎င်းတို့၏ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ အတွက် အလားတူ ပြလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဖက်ဒရယ် ဥပဒေ အရ နိုင်ငံ အတွင်းရှိ အဲမရိတ် နိုင်ငံသားများ အားလုံးနှငင့် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများ အာလုံးတို့မှာ ပေါင်းစပ်ထားသော မယူမနေရ ကျန်းမာရေး အာမခံ အစီအစဉ်ဖြင့် အကာအကွယ် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ The introduction of mandatory health insurance in Abu Dhabi for expatriates and their dependants wasamajor driver in reform of healthcare policy.
ယူအေအီး အနေနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ အတွင်းရှိ အာရပ်နိုင်ငံများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီ အတွင်းမှ လာရောက် ဆေးကုသသူ နိုင်ငံခြားသား များကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေသည်။ ယူအေအီး အနေနှင့် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ အတွင်းရှိ အခြား အာရပ်နိုင်ငံများထက် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပို၍ အဆင့်မြင့် သဖြင့် ပလတ်စတစ် ဆာဂျရီ နှင့် အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်မှုများ၊ နှလုံးနှင့် ကျောရိုး ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ သွားနှင့် ခံတွင်း ကုသမှုများ ခံယူမည့် နိုင်ငံခြားသား ဆေးကုသသူ အများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
↑ Labor Migration in the United Arab Emirates: Challenges and Responses။ migrationpolicy.org။
↑ Oil – proved reserves။ Cia.gov။ 20 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ United Arab Emirates profile။ BBC News (14 November 2012)။
↑ Iyer၊ Srinivasan။ "Dubai International is world’s busiest airport"၊ The National၊ 30 December 2014။
↑ IMF Data Mapper။ Imf.org။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ The World Factbook။
↑ ၈.၀ ၈.၁ WTO Trade Statistic 2009။ Stat.wto.org။4March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Economic diversification in the GCC countries။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Sharia law and Westerners in Dubai: should non-Muslims in UAE be made to face Islamic justice?။
↑ United Arab Emirates: Torture and Flogging။ Fanack။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Country Reports on Human Rights Practices for 2008။ Jeffrey T. Bergner။
↑ Laipson၊ Ellen (3 September 2014)။ The UAE and Egypt's New Frontier in Libya။ The National Interest။ 26 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Evans၊ Gareth (29 June 2011)။ Middle Power Diplomacy။ 26 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pennington၊ Roberta။ "UAE archaeologist discovers the Swiss Army knife from 130,000 years ago"၊ The National၊5February 2014။ November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Abu Dhabi Islands Archaeological Survey (ADIAS)။ Adias-uae.com။
↑ Ibrahim Abed; Peter Hellyer (2001)။ United Arab Emirates,aNew Perspective။ Trident Press Ltd။ pp. 83–84။ ISBN 978-1-900724-47-0။
↑ Bey၊ Frauke (1996)။ From Trucial States to United Arab Emirates။ Longman။ UK။ pp. 22–23။ ISBN 0582277280။
↑ Thomas၊ Jen။ "Ancient secrets of Sir Bani Yas unveiled"၊ The National၊ 12 December 2012။ November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hawley၊ Donald (1971)။ The Trucial States။ Allen & Unwin။ UK။ pp. 48–51။ ISBN 9780049530058။
↑ Bey၊ Frauke (1996)။ From Trucial States to United Arab Emirates။ Longman။ UK။ p. 127။ ISBN 0582277280။
↑ Bey၊ Frauke (1996)။ From Trucial States to United Arab Emirates။ Longman။ UK။ pp. 127–128။ ISBN 0582277280။
↑ History of the UAE. Sinimar.eu. Retrieved on 10 October 2015.
↑ History of The United Arab Emirates – Ottoman Rule. Liquisearch.com. Retrieved on 10 October 2015.
↑ Diabetes, Fight. (17 March 2012) British and Ottoman rule. Historyuaeedu.blogspot.com.tr. Retrieved on 10 October 2015.
↑ Bey၊ Frauke (1996)။ From Trucial States to United Arab Emirates။ Longman။ UK။ p. 43။ ISBN 0582277280။
↑ Bey၊ Frauke (1996)။ From Trucial States to United Arab Emirates။ Longman။ UK။ p. 282။ ISBN 0582277280။
↑ November 3, 2008 – The UAE is the old Pirate Coast. Not much has changed.။ Wayne Madsen Report။
↑ Tore Kjeilen (4 April 2007)။ Trucial States။ Looklex.com။
↑ United Arab Emirates – The Economy". Library of Congress Country Studies. Countrystudies.us. Retrieved 14 July 2013.
↑ Al Qasimi၊ Sultan (1986)။ The Myth of Arab Piracy in the Gulf။ Croom Helm။ UK။ ISBN 0709921063။
↑ UAE History & Traditions: Pearls & pearling။ UAEinteract။
↑ Al Khaleej News Paper။3August 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Trucial States Council until 1971 (United Arab Emirates)။ Fotw.net။ 29 April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ United Arab Emirates (06/07)။ State.gov။
↑ Gray၊ Matthew (7 October 2014)။ Global Security Watch – Saudi Arabia။ Santa Barbara: ABC-CLIO။ p. 99။ ISBN 978-0-313-38699-2။ 20 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Historic UAE-Oman accord involves 272km of border"၊ Gulf News၊ 22 July 2008။ November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Heard၊ David (2013)။ From Pearls to Oil။ Motivate။ UAE။ pp. 41–42။ ISBN 9781860633119။
↑ "Calypso explores for underwater oil" (August 1955). National Geographic Magazine CVIII (2). Retrieved on 19 November 2014.
↑ Oil and Gas in the UAE။ 19 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Heard၊ David (2013)။ From Pearls to Oil။ Motivate။ UAE။ pp. 413–416။ ISBN 9781860633119။
↑ "Middle East | Country profile: United Arab Emirates"၊ BBC News၊ 11 March 2009။
↑ Jonathan Gornall (2 December 2011)။ Sun sets on British Empire as UAE raises its flag။ The National။
↑ History the United Arab Emirates (UAE) – TEN Guide။ Guide.theemiratesnetwork.com (11 February 1972)။ 8 June 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ TONB ISLANDS (GREATER and LESSER), two tiny islands of arguable strategic importance in the eastern Persian Gulf, south of the western tip of Qešm island (25 September 2012)။
↑ Krane၊ Jim (2009)။ City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism။ pp. 81–84။
↑ Bahrain – INDEPENDENCE။ Country-data.com။
↑ United Arab Emirates: History, Geography, Government, and Culture —။ Infoplease.com။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Simon C. Smith (2004)။ Britain's Revival and Fall in the Gulf: Kuwait, Bahrain, Qatar, and the Trucial States, 1950–71။ Routledge။ pp. 64–။ ISBN 978-0-415-33192-0။
↑ Trucial Oman or Trucial States – Origin of Trucial Oman or Trucial States | Encyclopedia.com: Oxford Dictionary of World Place Names။ Encyclopedia.com။ 19 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Alfred B. Prados (20 November 2002) Iraqi Challenges and U.S. Responses: March 1991 through October 2002။ 18 August 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။, The Library of Congress, US.
↑ Sean Foley (March 1999). "The UAE: Political Issues and Security Dilemmas". Middle East Review of International Affairs3(1). မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 13 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ United Arab Emirates profile – Timeline။ BBC News (14 November 2012)။
↑ "Veteran Gulf ruler Zayed dies"၊ BBC News၊2November 2004။
↑ ၅၇.၀ ၅၇.၁ United Arab Emirates: Silencing dissent in the United Arab Emirates (UAE)။ Amnesty International။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE Oil and Gas။ Uae.gov.ae (19 June 1999)။5July 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Saudi-UAE Disputes။ Arabmediawatch.com (21 August 1974)။ 8 April 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ UAE Disputes, International UAE Disputes, UAE Boundary Dispute, UAE National Disputes, UAE Emirate Disputes, Claims Three Islands, Abu Musa Island, Greater & Lesser Tumb, The History of Islands, Human Resources UAE, Arab Emirates။ Uaeprison.com (14 May 2007)။
↑ Muhammad Aurang Zeb Mughal (2013). Persian Gulf Desert and Semi-desert. Robert Warren Howarth (ed.), Biomes & Ecosystems, Vol. 3. Ipswich, MA: Salem Press, pp. 1000–1002.
↑ rak Weather။ Abudhabi.ms (8 March 2007)။
↑ "In Pictures | Flooding in the UAE"၊ BBC News၊ 15 January 2008။
↑ Nasouh Nazzal။ "Heavy snowfall on Ras Al Khaimah's Jebel Jais mountain cluster"၊ Gulf News၊ 24 January 2009။
↑ UAE Government: Political system။ UAEinteract။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE။ Arabruleoflaw.org။3May 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE Federal e-Government Portal။ Government.ae။ 1 August 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ UAE federal eGovernment။ Service Channels- The UAE Government Official Portal။ 8 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Reporter၊ Staff။ Women shining in new UAE Cabinet - Khaleej Times။
↑ "Trouble in the United Arab Emirates: The perils of autocracy"၊ the Economist။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Secret Desert Force Set Up by Blackwater's Founder"။
↑ "Secret Desert Force Set Up by Blackwater's Founder"။ "The United Arab Emirates — an autocracy with the sheen ofaprogressive, modern state — are closely allied with the United States, and American officials indicated that the battalion program had some support in Washington."
↑ ၇၇.၀ ၇၇.၁ United Arab Emirates Reports။ Freedom House။7May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Foreign Policy Aspects of the War Against Terrorism: Fourth Report of Session။ House of Commons of the United Kingdom။ p. 60။
↑ Egypt and U.A.E. Relations။ Egypt State Information Service Sis.gov.eg။9January 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Relations with UAE get wider, deeper။ Pakistan Observer (26 November 2008)။ 26 June 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၈၁.၀ ၈၁.၁ What countries spent the most to influence the USA in 2013။
↑ India-UAE Bilateral Relations။ Embassy of India, UAE။ 16 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Konfliktbarometer 2001။ 12 March 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။. Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung
↑ UAE Government: Foreign policy။ UAEinteract (1 January 2008)။
↑ UAE and France sign landmark nuclear cooperation agreement။ Gulf News (16 January 2008)။
↑ "France signs up to £2 billion deal to build nuclear plants in the Gulf"၊ The Times၊ 16 January 2008။ Archived from the original on5December 2010။
↑ ၈၈.၀ ၈၈.၁ Japan-United Arab Emirates Relations။ Ministry of Foreign Affairs of Japan။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "UAE confirms discussions with France on purchase of Rafale aircraft"၊5June 2008။4April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9May 2013။
↑ "Hollande says UAE Rafale jet deal depends on price"၊ 15 January 2013။
↑ US launches air strikes against Isil in Syria။ The Telegraph (24 September 2014)။
↑ BBC News – Libya no-fly zone: Coalition firepower။ BBC News။ 25 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၄.၀ ၉၄.၁ UAE, Bahrain say 50 soldiers killed in Yemen attack။ 17 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Scores of Gulf troops killed in Yemen conflict။ 17 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၆.၀ ၉၆.၁ Census 2008။ Ministry of Economy and Planning, Government of the United Arab Emirates (2008)။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၈.၀ ၉၈.၁ 2013 Human Rights Reports: United Arab Emirates။ US Department of State။ “Sharia (Islamic law) courts, which adjudicate criminal and family law, have the option of imposing flogging as punishment for adultery, prostitution, consensual premarital sex, pregnancy outside marriage, defamation of character, and drug or alcohol abuse.”
↑ U.N. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: United Arab Emirates။ Human Rights Voices။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Country Reports on Human Rights Practices for 2007။ Government Printing Office။ p. 2092။ ISBN 978-0-16-081399-3။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE: Judicial corporal punishment by flogging။ World Corporal Punishment Research။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dh500,000 expat verbal abuse case to be retried။ The National (8 December 2010)။ “In the UAE, only verbal abuse pertaining to the sexual honour ofaperson would be tried under Sharia. For guilt to be proven, the attack must have been made in public and one reliable witness must testify. If convicted,aperson would be sentenced to 80 lashes and would never be accepted asavalid witness inaSharia-based case.”
↑ Pregnant maid to get 100 lashes after being found guilty of illegal affair။ 7daysindubai.com (9 October 2013)။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World News » Teenager to be lashed for adultery. Gulf Daily News (10 July 2010). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Illicit lovers sentenced to 100 lashes each. GulfNews.com (15 November 2010). Retrieved on 2015-11-26.
↑ ၁၀၆.၀ ၁၀၆.၁ Two women sentenced to death for adultery. Khaleej Times (25 September 2013). Retrieved on 26 November 2015.
↑ Prison for couple who conceived outside of wedlock | The National. Thenational.ae (22 August 2011). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Amnesty International Report 2007 – United Arab Emirates. Refworld (23 May 2007). Retrieved on 2015-11-26.
↑ ၁၁၀.၀ ၁၁၀.၁ Court jails pregnant Filipina in Fujairah – Emirates 24|7. Emirates247.com (9 October 2013). Retrieved on 2015-11-26.
↑ DUBAI: Alleged victim of gang rape sentenced to one year in prison | Babylon & Beyond | Los Angeles Times. Latimesblogs.latimes.com (17 June 2010). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Drunk worker rapes 2-year-old girl in Abu Dhabi။ Emirates247.com (January 2014)။
↑ Man to get 80 lashes for drinking alcohol. GulfNews.com (19 February 2010). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Emirati man to be lashed, executed, for murder and drinking alcohol။ Gulf News (May 2012)။
↑ Man who stabbed brother in drunken fight in Abu Dhabi jailed for year | The National. Thenational.ae (14 March 2013). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Man who stabbed brother in drunken fight in Abu Dhabi jailed for year။ The National (March 2013)။ “The younger brother admitted illegally consuming alcohol and was sentenced to 80 lashes –apunishment prescribed under Sharia.”
↑ Man appeals 80 lashes for drinking alcohol in Abu Dhabi | The National. Thenational.ae (9 August 2012). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Husband jailed for letting friend abuse his wife။ 7days.ae (9 March 2013)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “As well as the jail term for rape, the Supreme Court also ordered that the defendants be given 80 lashes for drinking alcohol.”
↑ Cocaine trace due to drinking Red Bull Cola, Abu Dhabi court hears | The National. Thenational.ae (14 August 2012). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Man jailed for raping step-daughter။ 7days.ae (6 March 2013)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “As well as the jail term he was also fined Dhs10,000 for reckless driving and will receive 80 lashes for drinking alcohol.”
↑ Drinking costs dad custody of kids – Emirates 24|7. Emirates247.com (13 March 2011). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Fujairah man is jailed for drunken kidnap bid Archived 23 September 2015 at the Wayback Machine.. 7days.ae (13 June 2012). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Emirati to be executed for murder in Fujairah – Emirates 24|7. Emirates247.com (29 May 2012). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Al Jandaly၊ Bassma (16 April 2006)။ Estonian soldier to be lashed။ Gulf News။
↑ Girl to receive 60 lashes for illicit sex. GulfNews.com (20 June 2007). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Indian lover in UAE sentenced to 60 lashes – Express India. Expressindia.indianexpress.com (8 June 2002). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Motorist sentenced to 80 lashes for drink driving။ 7days.ae (26 November 2012)။
↑ ၁၂၉.၀ ၁၂၉.၁ VI. Charges and Penalties against Domestic Workers။ Human Rights Watch (2014)။
↑ Swaying car exposes Fujairah drunk driver။ Emirates 247 (26 June 2013)။
↑ Drink-drive student to get 80 lashes။ Khaleej Times (27 March 2013)။
↑ Motorist sentenced to 80 lashes for drink driving. 7days.ae (26 November 2012). Retrieved on 2015-11-26.
↑ 80 lashes and one month in jail for drink driving. GulfNews.com (12 August 2010). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Drunk driver sentenced to 80 lashes | The National. Thenational.ae (28 July 2010). Retrieved on 2015-11-26.
↑4years and 80 lashes for drug addict – Emirates 24|7. Emirates247.com (1 November 2011). Retrieved on 2015-11-26.
↑ 80 lashes, jail for drink-driving upheld – Emirates 24|7. Emirates247.com (18 May 2011). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Couple deny kissing on Abu Dhabi Corniche | The National. Thenational.ae (10 January 2013). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Woman denies affair after hearing she faces stoning | The National. Thenational.ae (29 July 2009). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Expat faces death by stoning after admitting in court to cheating on husband Archived6October 2014 at the Wayback Machine.. 7daysindubai.com. Retrieved on 26 November 2015.
↑ Woman Sentenced To Death By Stoning In Abu Dhabi – Emirates Woman. Emirateswoman.com. Retrieved on 26 November 2015.
↑ Asian housemaid gets death for adultery in Abu Dhabi. Qatar Living (4 May 2014). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Man faces stoning in UAE for incest | Latest News & Updates at Daily News & Analysis. Dnaindia.com (14 April 2007). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Woman denies affair after hearing she faces stoning။ The National (Abu Dhabi) (29 July 2009)။
↑ Hotel executive who had abortion gets jail term။ The National (30 December 2010)။
↑ "Change plea or you’ll be stoned": Husband who admits cheating given legal advice by judge။ 7days.ae (6 April 2014)။5April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ To avoid 100 lashes and prison, woman retracts plea in sex case။ The National (9 October 2009)။
↑ Lawyer urges acquittal of woman on zina charges။ The National (Abu Dhabi) (26 November 2010)။
↑ ၁၄၉.၀ ၁၄၉.၁ Britons 'liable to Sharia divorces' in UAE – BBC News. Bbc.co.uk. Retrieved on 26 November 2015.
↑ Evans, Robert. (9 December 2013) Atheists face death in 13 countries, global discrimination: study. Reuters. Retrieved on 2015-11-26.
↑ The International Briefing: Persecution of Atheists and Apostates။ 28 April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE to deport expats abusing religions။ Emirates 247 (22 July 2015)။
↑ ၁၅၃.၀ ၁၅၃.၁ Butti Sultan Butti Ali Al-Muhairi (1996). "The Islamisation of Laws in the UAE: The Case of the Penal Code". Arab Law Quarterly 11 (4): 350–371.
↑ Alex။ "UAE imprisoning rape victims under extramarital sex laws – investigation" (in en-GB)၊ 2015-10-26။
↑ ၁၅၆.၀ ၁၅၆.၁ ၁၅၆.၂ ၁၅၆.၃ "Dubai ruler pardons Norwegian woman convicted after she reported rape"၊ CNN.com။ 10 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅၇.၀ ၁၅၇.၁ ၁၅၇.၂ Bakr၊ Amena။ "Woman jailed in Dubai after reporting rape hopes to warn others"၊ Reuters၊ 21 July 2013။5November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅၈.၀ ၁၅၈.၁ Dubai's Progressive Charade။ The Daily Beast။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅၉.၀ ၁၅၉.၁ Gang-rape victim in Dubai arrested for drinking alcohol: report။ New York Daily News။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ DUBAI: Victim of gang rape sentenced to one year in prison။
↑ "U.A.E. Woman Withdraws Gang-Rape Claim to Avoid Lashes, Prison Sentence"။
↑ "Court jails Emirati woman in gang rape case"။
↑ ၁၆၃.၀ ၁၆၃.၁ Divorcees, widows concerned about receiving 'permission' before remarrying။ The National (Abu Dhabi)။
↑ ၁၆၄.၀ ၁၆၄.၁ ၁၆၄.၂ ၁၆၄.၃ ၁၆၄.၄ United Arab Emirates International Religious Freedom Report, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2009)။ U.S. Department of State။
↑ Public kissing can lead to deportation | The National. Thenational.ae (7 July 2008). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Jailed Dubai kissing pair lose appeal over conviction. BBC News (4 April 2010). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Women get jail and deportation for kissing on Dubai public beach။ Gulf News (25 May 2008)။
↑ Couple deny kissing on Abu Dhabi Corniche။ “A man jailed and sentenced to 80 lashes for drunkenly kissing his girlfriend on the Corniche”
↑ ၁၇၀.၀ ၁၇၀.၁ "Swearing on Whatsapp 'will result in £40,000 fine and deportation, UAE rules'"၊ The Independent၊ 16 June 2015။
↑ UAE Imposes over $68,000 Fine, Jail Term for Swearing on Whatsapp; Expatriates Face Deportation။ International Business Times (16 June 2015)။
↑ Man to face trial in UAE for swearing in WhatsApp message။ 7days.ae (16 June 2015)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ British Expats Face Being Deported From UAE For Swearing On WhatsApp။ Yahoo News (16 June 2015)။
↑ Australian woman deported from Abu Dhabi over Facebook post။ Khaleej Times (15 July 2015)။
↑ Australian woman deported from the UAE after Facebook post။ Arabian Business (15 July 2015)။
↑ Australian jailed over Facebook post deported from Abu Dhabi။ Stuff.co.nz (15 July 2015)။
↑ Expat deported after posting abusive message about parking on Facebook။ 7days.ae (15 July 2015)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Australian expat deported following Facebook post။ Gulf News (15 July 2015)။
↑ United Arab Emirates။ “Facts as drug trafficking, homosexual behaviour, and apostasy are liable to capital punishment.”
↑ ၁၈၀.၀ ၁၈၀.၁ Man Accused of 'Gay Handshake' Stands Trial in Dubai။ 30 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Federal criminal statute In UAE။ Sodomylaws.Org။ 14 June 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Amnesty International Report 1999 – United Arab Emirates။
↑ United Arab Emirates: Briefing for the Human Rights Council Universal Periodic Review။
↑ United Arab Emirates – Global Progress။ 11 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Punishments include flogging, amputation, and – as retaliation – injury similar to that for which the offender has been convicted of inflicting on the victim.”
↑ United Arab Emirates – Country Reports on Human Rights Practices။ “In February an Indonesian woman convicted of adultery by the Shari'a court in the Emirate of Fujairah, was sentenced to death by stoning after she purportedly insisted on such punishment. The sentence was commuted on appeal to 1 year in prison, followed by deportation. In June 1998, the Shari'a court in Fujairah sentenced three Omani nationals convicted of robbery to have their right hands amputated. The Fujairah prosecutor's office instead commuted the sentence toaterm of imprisonment.”
↑ Defining Sharia's role in the UAE's legal foundation။ The National (Abu Dhabi)။
↑ "Crucifixion for UAE murderers"၊ The Independent။
↑ UAE: Further information on fear of imminent crucifixion and execution။ Amnesty International (September 1997)။
↑ UAE: Fear of imminent crucifixion and execution။ Amnesty International (September 1997)။
↑ Federal Law No (3) of 1987 on Issuance of the Penal Code။ United Nations Office on Drugs and Crime။
↑ Measures Against Corruptibility, Gifts and Gratification – Bribery in the Middle East။ Arab Law Quarterly။
↑ Riazat Butt။ "Britons warned to respect Ramadan while holidaying in Dubai"၊ The Guardian၊ 31 July 2011။
↑ Criminal Law of Dubai။ lawyersuae.com။
↑ No dancing in public: Dubai. Arab News (15 March 2009). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Divorcees, widows concerned about receiving 'permission' before remarrying။
↑ UAE: Ruthless crackdown on dissent exposes 'ugly reality' beneath façade of glitz and glamour။ Amnesty International။
↑ ၁၉၈.၀ ၁၉၈.၁ ၁၉၈.၂ ၁၉၈.၃ Forced Disappearances and Torture in the United Arab Emirates။ Arab Organisation for Human Rights (November 2014)။ 15 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉၉.၀ ၁၉၉.၁ UAE: Enforced Disappearance and Torture | Human Rights Watch. Hrw.org. Retrieved on 26 November 2015.
↑ Human Rights in the United – UAE: Enforced disappearances continue Archived 26 November 2015 at the Wayback Machine.. Ic4jhr.net. Retrieved on 26 November 2015.
↑ Silencing dissent in the UAE။ Amnesty International။ 22 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၀၄.၀ ၂၀၄.၁ ၂၀၄.၂ ၂၀၄.၃ ၂၀၄.၄ ၂၀၄.၅ ၂၀၄.၆ ၂၀၄.၇ ၂၀၄.၈ ၂၀၄.၉ UAE's crackdown on democracy short-sighted Archived 26 November 2015 at the Wayback Machine.. Middleeastmonitor.com. Retrieved on 26 November 2015.
↑ David Hearst (2013)။ The UAE's bizarre, political trial of 94 activists။ The Guardian။
↑ Ben Brumfield။ "Man faces 10 months jail for tweets about trial in UAE"၊ CNN၊ 11 April 2013။ 18 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "3 women risk torture in secret UAE detention over 'I miss my brother' tweet – Amnesty"၊ Russia Today၊ 27 February 2015။ 11 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁၀.၀ ၂၁၀.၁ Urgent Action: Enforced Disappearance of Qatari Nationals။ Amnesty International။
↑ Cambanis၊ Thanassis။ "In Rape Case,aFrench Youth Takes on Dubai"၊ The New York Times၊ 1 November 2007။
↑ ABC News Exclusive: Torture Tape Implicates UAE Royal Sheikh။ ABC News (22 April 2009)။ 24 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amena Bakr။ "UAE ruling family member says not guilty of torture"၊ 14 December 2009။ 10 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amena Bakr။ "UAE ruling family member acquitted in torture trial"၊ 10 January 2010။ 10 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rights group questions UAE trial။ Al Jazeera (11 January 2010)။ 11 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "US concern after UAE acquits sheikh in torture case"၊ BBC News၊ 12 January 2010။ 12 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shiites deported from Gulf lament injustice။ Daily Star (4 July 2013)။
↑ Concern over deportations from Gulf Arab states။ Raidió Teilifís Éireann (5 July 2013)။
↑ UAE urged to allow appeal on deportations။ Financial Times (July 2013)။
↑ UAE deportations raise questions in Lebanon။ Global Post (July 2013)။
↑ Lebanese Shiites Ousted from Gulf over Hizbullah Ties။ naharnet.com (July 2013)။
↑ Lebanese Living in UAE Fear Deportation။ Al Monitor (2013)။
↑ UAE Deports 125 Lebanese Citizens။ Al Monitor (2013)။
↑ UAE/Lebanon: Allow Lebanese/Palestinian Deportees to Appeal။ Human Rights Watch (2010)။
↑ Lebanese Families in UAE Face Deportations on Short Notice။ Al Monitor (2012)။
↑ Hezbollah and the Gulf။
↑ Thousands of Shias Deported from UAE။ majlis.org.uk။ 25 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sarah Leah Whitson (24 March 2007)။ UAE: Draft Labor Law Violates International Standards။ Human Rights Watch။
↑ "Indian workers jailed in Dubai over violent protest"၊ 24 February 2008။
↑ Dubai drugs trial: Mother tells of 'torture horror'။ BBC (28 April 2013)။2April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dubai drugs trial: David Cameron 'concerned' over torture claims (29 April 2013)။2April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dubai pardons three Britons 'tortured' and jailed over drugs။ The Guardian (19 July 2013)။2April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Modern Day Slave Labor: Conditions for Abu Dhabi's Migrant Workers Shame the West။
↑ ၂၃၅.၀ ၂၃၅.၁ ၂၃၅.၂ United Arab Emirates။ International Trade Union Confederation။
↑ United Arab Emirates။ International Trade Union Confederation။
↑ Conditions for Abu Dhabi's migrant workers 'shame the west'။
↑ Call for UN to investigate plight of migrant workers in the UAE။
↑ ၂၃၉.၀ ၂၃၉.၁ Senior UAE official arrested over driver attack. ArabianBusiness.com. Retrieved 26 January 2014.
↑ Human Rights in The UAE။ 13 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Arrest of Dr Al Shawa။
↑ Criminal Law of Dubai။
↑ ၂၄၅.၀ ၂၄၅.၁ UAE: "Dress Modestly" Drive Gains Momentum။
↑ Twitter Campaign Wants Female Visitors To Respect UAE Dress Code in Malls။ 28 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dubai Mall dress code။
↑ UAE: Dress Code Campaign Urges Extra Inches of Clothing။
↑ Dubai shopping malls urge visitors to dress modestly။
↑ Dubai dress code။
↑ Freedom of the Press။
↑ United Arab Emirates။ Carnegie Endowment။
↑ United Arab Emirates – Media။ BBC News (15 June 2012)။
↑ ၂၅၄.၀ ၂၅၄.၁ UAE's economy growth momentum set to pick up။ Khaleej Times (27 December 2013)။4January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GDP to hit $474.2b in 2018။ Khaleej Times (4 July 2013)။5January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ranking of Economies။ World Bank Group။
↑ Speaking of Water။
↑ Fitch၊ Asa။ "Dubai Unveils Balanced Budget for 2015"၊ The Wall Street Journal၊4January 2015။
↑ Dubai Ranks Fifth Among Top Global Destinations For Travellers။ Gulf Business။ 17 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Infrastructure in the United Arab Emirates (UAE)။ The Prospect Group။
↑ UAE yearbook 2009။ Slideshare.net။
↑ The Seismic Activities of Dubai Property Bubble and Inevitable Consequences။ Asian Tribune (9 November 2009)။
↑ ၂၆၃.၀ ၂၆၃.၁ United Arab Emirates။ ITUC။
↑ Krane၊ Jim (2009)။ City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism။ New York, NY: St. Martin's Press။ pp. 267–270။ ISBN 978-0-312-53574-2။
↑ Anderson၊ Elizabeth။ "Dubai Overtakes Heathrow To Become World's Busiest"၊ The Telegraph၊ 27 January 2015။
↑ "From sand to sea"၊ International Railway Journal၊ 21 March 2012။
↑ "Will metro change Dubai car culture?"၊ BBC News၊ 11 September 2009။
↑ UAE Ports။ Uae.gov.ae။ 14 July 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ United Arab Emirates (PDF)။ OpenNet Interactive။
↑ UAE telecom market grows with competition | Mobile telecomms report။ Ameinfo.com။
↑ UAE reports high website censorship။ The National Newspaper (12 June 2009)။
↑ WAM။ Expo impact: UAE to see $35bn contracts – Emirates 24/7။ Emirates 24/7။ 8 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hosting of Expo 2020 unprecedented achievement for the region, says Sultan Al Jaber – WAM။ 8 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dubai Expo will open up unlimited opportunities – WAM။ 8 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Expo 2020...What it Means to Us?။ CSS Light House။ 8 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၇၇.၀ ၂၇၇.၁ UAE National Bureau of Statistics (PDF)။ 8 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ United Arab Emirates။ World Gazetteer။ 27 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named PopulationWorldBank
↑ Population leaps to 8.19 million။ The National (30 May 2010)။
↑ Andrzej Kapiszewski (22 May 2006)။ Arab versus Asian migrant workers in the GCC countries (PDF)။ UN Department of Economic and Social Affairs။
↑ Net migration rate။ Cia.gov။
↑ Camille Paldi (13 July 2010) UAE Islamic Finance Archived 26 February 2013 at the Wayback Machine.. I Love The UAE. Retrieved 27 September 2013.
↑ Habboush, Mahmoud. (10 October 2013) Call to naturalise some expats stirs anxiety in the UAE. Uk.reuters.com. Retrieved on 10 October 2015.
↑ ၂၈၆.၀ ၂၈၆.၁ Andy Sambidge (7 October 2009)။ UAE population hits 6m, Emiratis make up 16.5%။ ArabianBusiness.com။
↑ Indians, Pakistanis make up 37% of Dubai, Sharjah, Ajman population။7August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Expat numbers rise rapidly as UAE population touches 6m။ Uaeinteract.com။9October 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mcintosh၊ Lindsay (16 June 2008)။ Terror red alert for 100,000 British expats in Dubai။ The Scotsman။
↑ Giles Whittell။ "British pair face jail for kissing in Dubai restaurant"၊ The Times၊ 15 March 2010။ Archived from the original on 25 May 2010။
↑ Editorial: The Ideal Prince။ Arabnews.com (3 November 2004)။9July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Table 3.10 Urbanization (PDF)။ World Development Indicators။ 25 March 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Life expectancy at birth။ The World Factbook။
↑ ၂၉၄.၀ ၂၉၄.၁ Average life expectancy in UAE rises to 75 years။ Uaeinteract.com။
↑ Sex ratio။ The World Factbook။
↑ International Religious Freedom Report for 2012 – United Arab Emirates။ Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor။
↑ Bassma Al Jandaly (5 April 2008)။ Churches and temples in the UAE။ Gulf News။
↑ Islam: Sunnis and Shiites (PDF)။ investigativeproject.org (23 February 2004)။
↑ Christensen၊ Shane (2010)။ Frommer's Dubai။ John Wiley & Sons။ p. 174။ ISBN 978-0-470-71178-1။
↑ ၃၀၂.၀ ၃၀၂.၁ ၃၀၂.၂ Folklore and Folklife in the United Arab Emirates။ p. 167။
↑ Handbook of Islamic Marketing။ p. 430။ Arabian and Persian inspired architecture is part of the expression ofa'local' identity.
↑ Country and Metropolitan Stats in Brief (PDF)။
↑ Official holidays in UAE။ Gowealthy.com။3May 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ UAE National Clothing။ Grapeshisha.com။4January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၀၇.၀ ၃၀၇.၁ Literature and poetry။ Visitabudhabi.ae (1 July 2009)။ 8 October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ About Sharjah – Sharjah Commerce Tourism Development Authority။ Sharjahtourism.ae (18 October 2009)။2February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Dubai FAQs။ Art Galleries Dubai။ Dubaifaqs.com။
↑ Saadiyat Island – Island of Happiness။ Saadiyat.ae (19 March 2009)။ 30 July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ John Irish and Tamara Walid (11 June 2009)။ Dubai eyeing new fashion, design district။ ArabianBusiness.com။
↑ Festival Info။ DesertRockFestival.com။ 19 January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ UAE Travel& Tourism: Food & Drink။ UAEinteract။
↑ Alcohol and Pork Licenses။ Alloexpat.com (30 May 2009)။
↑ Clubs, Sports Clubs UAE United Arab Emirates။ Indexuae.com။
↑ Gulf Cup 2007။ Gulf News။ 18 March 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ UAE Cricket Timeline။ Cricketeurope4.net။9July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ K.R. Nayar (6 September 2008)။ Not stumped by UAE cricket issues – Khan။ Gulf News။
↑ "AUTOSPORT.com – premium content"၊ Autosport၊ 28 August 2009။
↑ UAE Sports။ Uae.gov.ae။ 11 June 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ American University in Dubai. Undergraduate : Admission။ Aud.edu။ 24 December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Adult Literacy Rate: United Arab Emirates။ United Nations Statistics Division (19 June 2013)။ 15 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ “Subgroup: Total 15+ yr. Year: . Source: UNESCO Institute for Statistics. Unit: Percent. Value: 90.”
↑ UAE Education။ Uae.gov.ae။ 15 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ United Arab Emirates country profile (PDF)။ Library of Congress။
↑ Prevalence of obesity, ages 18+, 2010–2014။ World Health Organisation။ 26 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE Health။ Uae.gov.ae။ 12 June 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Dina El Shammaa (3 January 2009)။ Health cover is mandatory။ Gulf News။
↑ Megan Detrie (15 November 2009)။ Dubai has eye on medical tourism။ The National Newspaper။ 24 November 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 September 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ&oldid=647910" မှ ရယူရန်
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။